Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): July 2013
တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ အဆင့်ရှိသော တိုင်းရင်း ညီလာခံကို ပြည်ပတွင် ကျင်းပ
at 7/31/2013 12:05:00 PM
ဤညီလာခံသို့ မျှော်လင့် မထားသည့် တိုင်းရင်း ပညာရှင်များ၊ ဆက်ဆံရေး ကြဲနေသည့် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု (PDF) အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ တက်ရောက် ခဲ့ကြသဖြင့် ၀မ်းသာ အားရမိ ကြောင်း ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါသည်။
“ ခါတိုင်းဆိုရင် အစည်းအဝေး တခု လုပ်တော့မယ် ဆိုရင် လမ်းစရိတ်ပေးပြီး ဖိတ်ကြရပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ တိုင်းရင်း ပညာရှင်တွေ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ ကိုယ်လာကြတယ်။ ပြီးတော့ ဖိတ်တော့ ဖိတ်တယ်။ လာပါ့ မလား ထင်ရတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ၊ ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်း အဖွဲ့တွေဆိုရင် အင်နဲ့အားနဲ့ကို တက်ရောက် လာတယ် ဆိုတော့ အတော်လေးကို အာရုံစိုက် လာကြတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုပွဲမျိုး တခါမှ မပြည့်စုံ ခဲ့ပါဘူး” ဟု ဆိုပါသည်။
ယခု ကျင်းပ နေဆဲ ဖြစ်သည့် ၄င်းတပြည်လုံး အတိုင်းအတာ ဆောင်သည့် တိုင်းရင်းသား ညီလာခံကို ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) မှ ကမကထ ပြုကာ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့စုံမှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း (၁၅၀) ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု (PDF) သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၌ ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတပ်ပေါင်း စုတွင် ပန်ဆန်း အခြေစိုက် ၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွှတ်ရေး ပါတီ UWSP ၊ မိုင်းလား အခြေစိုက် အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ပေါင်းစု NDAA ၊မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်မတော် (MNDAA) ခေါ်ကိုးကန့် အဖွဲ့နှင့် ဒီမိုကရေစီ သစ်တပ် မတော်-ကချင် (NDAK) တို့နှင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။
ဤတပ်ပေါင်းစုသည် (၁၉၈၉) ခုနှစ်ကတည်းက အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားပြီး (MNDAA)မှ လွဲပြီး ယနေ့အထိ အပစ် ရပ်ထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၄င်းတို့သည် အစိုးရမှတပါး မည်သည့် တိုင်းရင်းသား တပ်ပေါင်းစုကိုပင် ဆက်ဆံခဲ့ ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ဤအခြေအနေမှ ယခု UNFC ကျင်းပသော ညီလာခံသို့ တက်ရောက် လာခဲ့သဖြင့် ထူးခြားဖွယ်ရာ ဖြစ်နေ ပါသည်။
အလားတူပင် UNFC သည် ပြည်ပရှိ တိုင်းရင်း ပညာရှင် တချို့ကိုပါ ဖိတ်ကြား ထားသော်လည်း မထင်မှတ်ထားသည့် တိုင်းရင်းပညာရှင် အများအပြားက ကိုယ့်စရိတ်နှင့်ကိုယ် တက်ရောက် လာခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အပြင် ပြည်တွင်း၌ ရှိသော တိုင်းရင်း တပ်ပေါင်းစုများမှ အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း တက်ရောက် လာခဲ့ပါသည်။ ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များ အဖွဲ့(UNA) မှ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်၊ ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းညွန့်လွင်နှင့် မွန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီမှ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ထွန်းဖေ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် (၉) ဦး ပါဝင် တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
ထို့အတူ (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပြည်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီများ စုဖွဲ့ထားသည့် ညီနောင် တိုင်းရင်းသား ပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်း (NBF) မှ ကိုယ်စားများလည်း တက်ရောက် လာခဲ့ကြောင်း ဆိုပါသည်။
ယခုညီလာခံသို့ UNFC အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သည့် ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး (CNF)၊ ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO)၊ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ (SSPP)၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၊မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (MNSP)၊ ပအို့ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO)၊ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (PSLF)၊ ရခိုင်ပြည် အမျိုးသား ကောင်စီ (ANC)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် သမဂ္ဂ (LDU)၊ ဝ အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (WNO) နှင့် ကချင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNO) တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။
UNFC တပ်ပေါင်းစုဝင် မဟုတ်သည့် ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ WGEC ကိုယ်စားလှယ်များလည်း တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူထု လူတန်းစားများနှင့် CBO ကိုယ်စားလှယ် များပါ မကျန် တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်း တိုင်းရင်း ကိုယ်စားလှယ်များထက် ပြည်ပရောက် တိုင်းရင်း ကိုယ်စားလှယ်များက ပိုမို တက်ရောက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤမျှတိုင်းရင်းသား အရေးကို အလေးထားပြီး စုပေါင်းဆွေးနွေး လာနေကြသည့် တိုင်းရင်း ညီလာခံကြီးသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။ ဤသည် တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ ဆောင်နိုင်ဖွယ် ရှိသည့် တိုင်းရင်း ညီလာခံမျိုး ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ပြည်ပ၌ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ဤကဲ့သို့သော တိုင်းရင်း ညီလာခံမျိုး ပြည်တွင်း၌ ကျင်းပနိုင်ရန် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို မျှော်လင့်နေပါကြောင်း UNFC က ဆိုပါသည်။
UNFC သည် ပြီးခဲ့သည့်၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် UNFC အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်ကြသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များပါသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဆိုင်ရာမူဘောင် တရပ် ရရှိရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့PDF အဖွဲ့များ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ယင်းညီလာခံ၌ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးသည့်အခါ ကိုင်စွဲရမည့် မူဘောင် နှင့် ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စု ညီလာခံကြီး တရပ် ကျင်းပသွားရန်တို့ အပါအဝင် အချက် ၆ ချက် ပါရှိသော လမ်းပြမြေပုံကို ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခု ကျင်းပနေဆဲ တိုင်းရင်း ညီလာခံ၌မူ ဇူလိုင် (၂၉) ရက် ဖွင့်ပွဲနေ့တွင်၊ သဘာပတိ (၃) ဦး မိန့်ခွန်းပြောခြင်း၊ UNFC အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး နည်းလမ်း ရှာဖွေရန်နှင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည် ဆောက်ရေး အခြေခံမူများကို တင်ပြ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်ဟု ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါသည်။
Gap jahkring hte Simsa lamaLachyum ( DAW I )
at 7/30/2013 06:34:00 PM
Gap jahkring (Casefire) hte Simsa lam (Peace) ngu ai hpa rai ta?..(10) ning Jawng ma hpe sa san tim pyi chye nga ai. Gap jahkring/ Casefire= N-gap hkat saga=Hkring saga= kade gap hkat tim Lachyum n-pru ai.Machyu pala shama she re. Dai majaw matut nna n-gasat hkat saga…ngu ai lachyum rai nga ai.
Raitim…Myen niaGap Jahkring (Casefire) gaw dai hku lachyum n-rai nga malu ai. Gap ai gaw jahkring ai. Raitim shanhte Gap mayu ai shaloi Gap, Jahkring mayu ai shaloi bai Jahkring rai taw nga ma ai. Shanhte hpang maga de na grai sum machyi wa na zawn rai jang… Bai Hkring(Shn) kaga de Hpyen man yawng mayu jang(shn) Gayin gasat mayu jang gaw chyahkring mi gan hkring masu nna, ngut jang… Bai Gap hkat saga… rai wa sai.Ga Jahten ai Sing Nyan hte “Dahkyaw Dalam” sha rai nga ai.
Yawng chye ai hte maren- Myitkyina zuphpawng kaw myit hkrum da ai Statement (7) hpe teng sha shangang shakang nna, Bungli hpang taw nga saga ai…ngu ai hku 2013 ning July shata (23) ya shani Shatapru Shanglawt Rung kaw “ Technical Advisory Team” hpe hpaw hpang masai. U Awng Min wa mung- Jinghpaw Bu Hkang bai bu hkra rai, n-chye ai ni yu yang gaw- kanang na Lahtaw La Wa kun? Maran La Wa kun? nga na. Teng sha nga yang Myen Group ni yawng hkra gaw- U Tawng Hpyi hpun da ai U Hka ni sha rai nga ai. Kade ya hkam na kun? Shata kade hkam na kun? Myen ni hku nna gaw n-dai “ Tech/Team” hte Democracy Mungdan de teng sha Lagaw lahkam hkam sa wa nga saga ai…nga nna Mungkan de Shiga shapoi,Myiman la ai lam sha rai nga ai. Kabu hpa rai na kun? Mani hpa rai na kun?
Laika ka ai wa gaw- TinangaLahpa n-pu hpe tinang bai n-htang gajuk la nna she mani dung taw mat mayu sai. Hpa majaw ta? nga yang… Shanghte galaw ai Trick (Ma Akawoit) gaw, July shata htum maga de galaw na Myen Mung ting Gap Jahkring Signature hte seng nna “Namhtan Tawng” jaw sha masu ai lam sha rai nga ai. Mungkanaman hta- Anhte Myen ni gaw tsun ai hte maren galaw ai ni (shn) Sadi dung ai ni rai ga ai nga, madun dan masu nna, maga mi hku nna Mung Masa, Hpyen masa,Sut masa lam ni amyat htuk mat wa ai lam sha rai nga ai.
Myen Mung Simsa wa sai(Peace) byin nga saga ai ngu ai lachyum hpe Tech/Team hpaw poieMyen Hpyen Du ni Wa (35) yawng dawng hkra mani Ahawt Nying dan nna, La hpawk dum taw ai Sumla/ Shiga ni hpe Mungkan de madun dan nna- Hpyi sha ninghpang bai tam wa ai lam sha rai nga ai. Lam mi hku tsun ga nga yang- 2014 ning Asian Ningbaw Tingnyang lu dung na matu hte Lahpaw si langai hte U manga, kru Gap hkra lu hkra (shn) (Myen hku)- Kalang Kahtam yang Daw mali, manga,lu dumhpyawt di na matu Maw Lanyet ni hkrai rai nga malu ai.
N-dai Tech/Team hpaw Poi hta(U-N) Dat Kasa Miss-Marianne sa du ai hpe mu mada lu nga ai.Kabu hpa re. Chyeju dum hpa Sakse rai nga sai. Miwa ni gaw kanang sa makoi mat ma ai kun? Makoi ai…ngu ai hta Myen hpe jai lang nna,Myen mung hpe gara hku Krawk sha,Manaw sha lu na lam Nyan daw taw nga sai re. N-dai Team Hpaw Poi hta- Sara kaba Sumlut Gam hte U Awng Min ni sha sa du ai hpe mu mada lu ai. Du Kaba Gun Maw n-lawm ai mung grai hkrak sai. Shat Makai gun sha hkyam sa mat saga ai. Raitim kaga Myitsu Salang ni sa shang lawm ai hpe “Shut ai”…ngu nna gaw n-tsun mayu nngai.
Shanhte Myen ni(Ka… ga) nga yang hkan (Ka…), (Manawt ga)… nga yang hkan Manawt lawm nna anhte lu la ging ai Ahkaw ahkang yawng hkra hpe Ahpu agung nna la da ra na Ten mung rai nga saga ai. Myen ni bai Masu na, N-masu na, Sadi dung na, N-dung na gaw anhte hte n-seng ai. Ahkyak ai gaw- shanhte bai Htawng hkat ga nga ai shaloi. Yup Kalang hprang mi rai rai..(O-K …I am Ready)- ngu lu na matu hkyen tawn, lajang tawn, jahting tawn da ra na ga ai.
Myen hpe n-kam tim kam Masu. N-mani dan mayu tim, Mani dan Masu nna,Myen ni kade ram lu Masu, lu Hkalem na ma ai kun? ngu ai hpe…Kraw hta lagu mani let, shanhteaLagaw Lahkam ni hpe Myi pyi n-grip hkra azi mada, maram dinglik yu taw nga na sha ahkyak dik rai nga ai. Laika ka ai wa hku nna grau mani Hah..Har mayu ai lam langai mi gaw- Simsa lam matut nna tsun jahta ai hta- Awng San Suu Kyi lawm wa na..nga ai Shiga rai nga ai. “Kumshu Pa ASSK” sa lawm nna hpa wa lak lak lai lai sa chye byin wa lu na da i? Let Padawng Manghkang kaw na zawn, ASSK hpe Myen Hpyen ni bai jai lang na lachyum sha rai nga ai. Mung Masha hte ASSK hpe adawt hkat shangun nna ASSK hpe yawng hkra N-ju mat na matu Maw Lanyet sha rai nga malu ai. Simsa lam hta ASSK shang lawm wa nna kadai wa Aten htum hkam kabu Aw law taw nga na rai ta? Teng sha nga yang ASSK gaw “Law” hte Jawng ngut tawn ai mi nga tim, Mung Masa kaw shang lawm yu ga ai wa n-re. Machyi taw nga ai Kanu Daw Khin Kyi hpe wa gawan ai Ten hte 8888 Jawngma ni Kasu Gabrawng wa ai ten, Awng Sanakasha re nga Mung Masa lam de dun garawt bang hkrum ai lam sha rai nga ai.
Myen MungaMung Masa lam hta ASSK hkan pa ra nang wa ai lam sha re. Mung Masa mahkrum madup mung n-nga,MungdanaLabau hpe pyi hkrak n-chye ai lam hpe ASSK tsun ai Ga hkum, Ga si ni madat yu nna chye na lu nga ai. Hpaji chye tim, Mahkrum Madup Experience nnga ai Wa gaw Hkauna lu tawn nna Dumsu n-lu ai Masha hte bung nga ai. Gara hku MungdanaDemocracy Ningbaw Ningla tai wa lu na rai ta? Myi n-pu na mu taw ai hpe sha gaw kadai mung chye tsun ai hkrai re. Kadai mung Masha na ra hkra chye shanyam ai hkrai re. ASSK hpe Democracy Ningbaw Ningla tai shangun ai gaw Hpyen La hpe Mam hkai shangun ai hte bung nga ai.Ya hpang daw de ASSKatsun shaga, galaw hkawm sa ai lam ni ma hkra gaw “Lamu hte Ga..Nai Lap hte Lahpra” byin mat salu ai. N-hti n-htang, U Di matu tam n-mu rai,gara gaw Baw re ,Lagaw re pyi n-chye mat salu ai. Hpa majaw dai hku byinata? Myen Hpyen niaU shoi shoi katut nna,shi aHkum hpe pyi shi n-madu lu ai majaw rai nga ai. Dai U shoi shoi hkrum ai ASSK…Simsa lam hte Gap Jahkring kaw sa shang lawm nna, hpa kaga lak lak lai lai Mahtai pru wa na lam nnga ai. Dai majaw anhte hku nna ASSK hte nau n-bawk hte ai sha, Myen Hpyen Du ni hte mahtang Dara hkat,Nyeng hkat,Adawt hkat nna anhte Ra ai Ahkaw ahkang ni hpe lu hkra hpyi la, Nyap la ra na gaw n-dai Ten nan rai nga saga ai re. “Num chyau chyau yang La si ai” nga Jinghpaw Ga Malai nga ai hte maren ASSK hte gaw nau n-chyau chyau ga ngu mayu nngai.
Mung Masa hte seng nna mung- NLD..ngu ai gaw ASSKamajaw, ASSK mung Kawa Bochuk Awng Sanamajaw Mung masha ni ASSK lawm ai NLD hpe Me bang nna,1990- ning hta Me 85% dang mat ai lam rai nga ai. Kawa zawn ASSK mung mi mai kam na kun? nga Hpun N-dung de htu shalun taw ai lam rai nga ai. Raitim dai ni ASSK hpe Myen Hpyen ni bai ahpyawp nna woi hprawn sha mat wa jang-(NLD) U Tin Oo, U Win Tin ni hte NLD Party ni hpa Ga hkaw mi mung n-chye tsun shaga mat masai. NLD gaw Zero/Kaman sha rai mat nga sai. Majoi Sign Board sha shakap da ai Party sha rai mat sai. Tinang kaw Atsam n-nga ai Num Labu (ASSK) hpe sha kam nna Party hpaw ai NLD ni- gaya kahpa rai nga sai. ManangaLadi kaw na N-sa sa mayu ai NLD ni Ladi pat, N-gup pat mat manu ai. Dai hte maren Num Labuahpang kaw na (shn) ASSK hpe Ninggang Cover shatai nna Mungkan hta myiman tam taw nga ai Myen Hpyen asuya ni mung-“Apalar” sha rai nga ai.
Ya gaw- Myen Hpyen asuya ni jai lang hkrum ai ASSK gaw Shaba si Chyalang tai mat sai re. ASSK Simsa Lam kaw sa lawm yang- U LoiaHkyi law she rai law. Myi maza, Na maza pyi she re. Mungkan ting mung ASSK hpe Myen Mung galai shai wa sai nga Masu ai wa (Untrue Lier), Mung masha hpe shingdu dat kau ai Democracy Masu jan nga hkyet rung jawng taw mat masai. Dai hta grau gaya kahpa gaw- ASSK Thamada grai byin mayu ai da. Mani hpa hkyet rung hpa she rai sai. Ahnar gade marin ai ngu ai shiaKraw kata na lam hpe tsun kapawk pru wa ai gaw- Sari kachyi mi pyi n-rawng ai,Standard n-nga dik ai lam ni nan rai nga sai. Dai sha n-ga…South Korea du ai shaloi mung- Gumsan Magam/ President grai galaw mayu ai nga.. Interview hta gaya n-su nga bai kahtap tsun dat ai majaw, Korea ni pyi grai mau jawng mat ma ai. Maigan kaw dai zawn nga sa tsun ai gaw Munghpawm Mungdanamatu grai Sari hkrat ai lam rai nga ai. Gaya Kahpa mung re. Democracy ngu ai gaw tinang ra ai, byin mayu ai hpe galaw la mai ai Mung Masa Lam n-rai nga ai. Mung MashaaRa sharawng ai lam hpe mahtang she Tinang gawng malai tai nna hkan galaw shadik shatup ya ra ai Gumrawng Gumtsa Mung Masa lam rai nga ai. Dai majaw Tinang byin mayu ai lam hpe madung dat nna “Ngai President grai galaw mayu ai” nga n-na tsun pru wa ai ASSK gaw… Democracy Myit jasat rawng ai Wa n-re…ngu hpe Asan sha chye na lu mat sai re.Dai majaw Mungkan ting AASK hpe “M” Kaba the Mau mat masai. Ya dai ni… ASSK hpe shakawn na,shagrau na, Sumla/ Photo rau Gayet nna Arawng la na Masha ni Shat Makai hte hkan tam tim pyi lu sana n-re. ASSKaMying gaw Krung Sinwa de hkrat bang mat sai salu ai. Nau chye nau lai..Gwi Hkye Du bai..ngu ai dai nan rai nga sai.
Thamada byin jang she Mung masha niaRa sharawng ai lam hpe grau lu galaw ya lu na re nga Mung Masha ni hpe hkan Asawng Organize galaw nna, kaja wa Thamada byin jang gaw Hpyen asuyaamatu sha bai rai mat na gaw chye chyalu rai nga ai. Moi mung Rap daw Dat Kasa tai na matu Kayin Mung daw Kawmu Ginwang hku nna, Kayin mareesa nga, Kayin n-ta kaw sa rawng, Kayin Yuptung jahpan kaw sa bang rai Ra lata poi shang wa sai re. ASSKaKanu Daw Khin Kyi gaw Kayin re majaw ASSK mung- Kayin Mung kaw Ra Lata sa shang jang, Kayin ni yawng hkra shi hpe Me bang ya na hpe tau hkrau sawn da chyalu rai nga lu ai. Dai majaw mung ASSK gaw Me law htum hte Kawmu GinwangaRap Daw Dat Kasa kalang ta lu mat ai hpe mu mada lu ai. Kawmu mare ngu ai Yupmang pyi n-mang yu ai ASSK gaw (Kayin)…ngu ai mying dut sha nna Rapdaw Dat Kasa kalang ta tai mat sai re. Dai ni Kawmu Ginwangamatu ASSK galaw ya ai hpa baw ngaata? Hpa n-nga ai.
Teng sha nga yang- ASSK gaw Kayin ni hpe grai tsawra nna n-rai. Rapdaw de lu shang na matu Kayin mying hpe dut sha kau ai lachyum sha rai nga ai. N-dai kaw san mayu ai Ga san langai mi gaw- ASSK hte Hpyen asuya ni gaw Yuptung jahpan hpe dan dan leng leng Masu nna Tara shang hkra mai galaw la ma ai da i? Kayin Mungdaw kaw nnga ai masha langai mi hpe Kayin Mungdaw na masha re nga- Hkringdat hpe kam ai hku mai ka la,galai bang la mai ma ai da i? Mahtai gaw asan sha rai nga ai. Hpyen asuya hte ASSK niamatu Constitution ngu ai Gawda ai Tara gaw shanhteaN-gup kaw sha re…ngu ai lachyum rai nga ai. ASSKaKanu gaw Kayin rai nna, Kawa Bo Chyoke Awng San mung Myen n-re. Bochyuk Awng SanaKawa gaw “U Hpa” nga ai.. “Hkang” (Ashu Chin) re lam hpe 2013- ning June shata na Internet Shiga hta Bochyuk Awng SanaDinghku Labau (Family Tree)emu hti lu nga ai. Ashu Chin (Pa Layangenga ai HKang) ni gaw Myen mying shamying nna, Budda naw ai ni tsumra mi nga ma ai. Myen mungaka-ang daw (Maye Latt Paing) Pyinmana grup yin gaw Hkang nianga shara ni rai nga ai. Ga shadawn Tonggoo grup yin kaw Kayin ni nga ai hte bung nga ai. Myen niaDaidaw Buga Native gaw Gala Mung India Ga she re. Myen ni gaw Shan Maw chyang amyu (Nyu Me,Cha Tu Lan) ai ni rai nna, Gala kaw na yu hkrat wa ai ni rai ma ai. Myen ni gaw- shanhteaHkum hpe shanhte Gala re pyi n-chye ai gaw Mani hpa rai nga ai. Shwebo masha ni hte Gala ni hpa naw shaiata? Achyang hkat hkat re ai ni hkrai rai nna, N-gup mung-Matsat shabat re ai, Ya Man(Kun-Ya) grai sha ja ai kaw na hkawt, Gala hte grai nan bung nga ai. Pagan Prat na Myen Num ni gaw Gala Num ni zawn “Sa Ri” hpun lawai ma ai. La ni mung Matu n-chywi ai “Tawngshe Pasu” bu nna, Kara Jawti (Yawng Htung)tawn da ma ai.(ABidama Yaza Tawka Min)….ngu ai gaw Gala mying rai nga ai. Abidama= Boik Mying, Yaza= Gala hku gaw Ra Ja nga ma ai. Tsawbawa (shn) Hkaw Hkam, Tawka= Masha Mying, Min=Hkaw Hkam…rai nga ai.
Kadun dawk tsun ga nga yang Myen ni gaw India Raja=Gala hkaw hkam amyu rai nna, Masu magaw, Hkalem hkalau rai, Myit Kyang n-kaja ai hta n-ga,Lagu Lagut Masu Magaw rai Kawa Hkaw Hkam WaaMadu Jan (Mi Hpaya) hpe pyi n-ngam ai- sa shut ai majaw India kaw na gawt kau (Pyi Nindan) hkrum ai amyu ni re. Thagawng kaw du ai shaloi she- Gala mying hpe magap shamat kau nna, grai wa zawn nga- Nat Kaung Nat Myat (Bramma Gyi Lay Ba)aMying la nna…(Bramma) amyu wa arai wa sai da. (Bramma) kaw nna she (Myanmar) ngu ai mying de N-sen gale mat wa nna, dai ni du-“ Myanmar Atsa Thagawng ka” nga taw ma ai re. Myanmar nga ai mying shawng lu hpang ai gaw Thagaung Prat kaw na re… nga ai hku re. Raitim-Thagaung Pratashawngenanhte Myen ni ganang na rai myit ta? ngu yang shanhte n-chye tsun mat sai. N-chye tsun ai ngu ai gaw KawaaMadu Jan hpe shut nna Gawt shapraw hkrum ai N-tsawm ai Labau,Madat n-pyaw ai Labau hpe shamat magap kau ai majaw shanhte Myen niaRudi N-pawt Labau hpe n-chye mat ai lam rai nga ai. Rai yang- ya na Myen niaLabau gaw jawata? Langai mi mung n-jaw ai. Masu ai hkrai re. Makam masham hte Laili laika ni yawng hkra mung- Teng sha nga yang Gala,Mon,Rakhaing hte Thai ni kaw na Copy hkrai rai nga malu ai. Hpang jahtum Myen Mung Shanglawt lu ai kaw du hkra Bo Chyuk Awng San hte Myen ni Japan hpe agying gasat shaten kau nna she lu tawn ai zawn zawn Myen MungaLabau Masu hpe tsun taw,hkai taw, Jawng laika hkan sharin taw nga ma ai. Gaya kahpa rai nga ai. Raitim Myen ni gaw Labu n-bu ai Gwi ni Gaya n-chye ai hte maren sha rai nga ai.
Dai ni na Myen Hpyen asuya ni gaw-“Burma”…nga ai mying hpe Moi EnglikaMayam prat na mying re nga n-ra ma ai. Bama…ngu ai hpe Englik ni Ga si garan nna- Bur Ma….ngu kau ai hta, N-sen mung n-brat ai majaw Bur Ma= Burma byin mat ai hpe shanhte Myen ni n-myit dum nga ma ai. Lam mi hku tsun ga nga yang Bama…nga jang gaw shanhte Myen ni hpe hkrai tsun ai lachyum hku mung byin wa ai majaw- Mungchying sha ni yawng hkra hpe lu up sha na matu grai si mani ai lachyum, Ga n-sen hte “Myanmar”.. nga ai hpe jai lang nga ma ai re. Ne Win Prat hta-“Pyitu Paing”..nga grai madat pyaw ai zawn nga tim..teng sha Madu ai/Paing ai wa gaw…Ne Win sha rai nga ai. Laika Ga hkum, Ga si, Ga n-sen hte Masu sha ai lam amyu mi rai nga ai. Mying gaw Myanmar..nga nna mi shamying mying, Shwe Myanra, Kyee Myanmar, Sein Myanmar nga nna mi shamying mying- myit Masin Matsat shabat rai jang gaw-Gwi gaw Gwi, Chyahkyawn gaw Chyahkyawn sha rai nga ai. Atsawp sha galai nna, Kraw kata de gaw Tsu, Yet rawng taw nga ai (Lup Wa) hte bung nga ai.
Lahtaetang madun lai mat wa sai hte maren- Bochuk Awng San hpe(Hkang) re chye jang..shanhte Myen ni Labau kaw na shamat kau hpang wa masai re. Teng sha nga yang ASSK gaw Hkang/Kayin rai nga ai. Budda naw nna Myen mying shamying tawn ai Bochuk Awng San hpe mung, dai ni du Myen naw shadu taw ai lam rai nga ai. Miwa amyu rai nga ai Bochuk Ne Win hpe Myen shadu, Maha Bandu La (Maran Hpundu La/Jinghpaw) hpe Myen shadu ai hte maren sha rai nga ai. Dai majaw Hkang Amyu rai nga ai Bochyuk Awng San hpe Hkungga jaw na, Azarni N-htoieHorn n-sen shangoi ai lam ni hpe hkum pat ai lam rai nga ai.Lam mi hku tsun ga nga yang- Mung Masha ni Bochyuk Awng San hpe naw dum,naw hkungga nga na hpe n-ra sharawng ai majaw rai nga ai.
Dai hta n-ga…. ASSK Rapdaw du jang Myen Ga Malai hku-“ Woi madun nna N-gu hpyi ” nga ai hpa Mungkan de Myen Hpyen asuya ni, hpyi lu hpyi sha, pru shang, tsun shaga loi na matu Baw nu bai shachyai bang wa masai. ASSK hpe- Myen Mung galai shai wa sai nga Masu shangun, Theing Sein hpe (Kam ai/ Yone De) nga tsun shangun, Sanction ni hpaw ya na matu tsun shangun, Maigan Mungdan ni rai jang ASSK hpe N-masu na re nga kam n-na Democracy mungdan lu gaw de sa wa lu na matu- Myen Mung masha ni Shinggyim Ahkaw ahkang hkrak tup lu hkam sha nna Mayak mahkak kaw na lawt lu na amtu Dollar Sen,Wan kahtap nna garum she garum. Kaja wa dai gumhpraw ni lu jang Myen Hpyen asuya ni gaw yawng hkra shanhteaSumbu kaw “Dawk”. ASSK gaw Sama pyi n-lu manam kau dat nga lu ai. Sanction hpaw dat ya ai hte Maigan na Arang Madu ni Myen Mun g de majoi goi, gashun gashe htu kaput shang wa masai. Myen hpyen asuya ni gaw Myen Mung ting na N-hprang sut rai ni yawng hkra hpe Ta Layung madi nna, dut hkrai dut sha, Lamu ga ni du hkra Eka Sen kaba hku nna shaning 30- 40 ning shap sha taw nga masai. Grau sawng ai gaw Mung masha niaHkauhting hkauna ni sha n-ga, Nga shara dum n-ta, Htinghput Hting ra ni hpe du hkra-Tawt lai Lamu Ga (Kyoo kyaw Myae) nga nna N-tara ai dang sha, dip sha, zing la taw nga masai re.
Munghpawm Myen Mung kaw Myihprap wan dai ram taw nna Wan shadaw?Candle ni sha shachyi taw nga ra ai Ten, Myen asuya ni gaw Miwa Mung de Shwe Pipe Line hku nna Yakhaing kaw na (Gas) ni hpe Manu paw paw pye pye hte dut sha taw nga masai re. N-dai Pipe Line hpe Myen ,Miwa,India hte Korea Mungdan (4) kaw na Company (6) jawm pawng galaw ai lam chye lu ai. Gasa20% hpe Myen asuya ni lu na rai nna, Pipe Line Myen mung hku shalai la ai Manu- Laning mi hta American Dollar Wan-13.81 Millions (Myen Kyat Gumhpraw- Wan (1243) hpe, Shaning (30) ning (Myen Kyat Gumhpraw Wan- 37,290) hpe Myen asuya ni akyu hkam sha lu na lam chye lu ai. Raitim Pipe Line lai di mat wa ai shara ni hkan na Mung Masha ni gaw matsan mayan rai Dum n-ta shamat, Yi Sun Hkau na shamat rai jam jau taw nga ma ai.
Rai yang…… ASSK tsun ai hku Myen Mung kaja wa galai shai taw nga sani? Grau nna “ Yubak hta Yubyen ra”…rai nga ai hpe- Meikhtila Manghkang shabyin nna, Muslim Gala ni hpe majoi hte sat, Makam masham mang hkang byin hkra galaw nna, Laknak samit hkyep langai mi pyi n-lu ai Muslim Gala ni hpe matsan mayen rai majoi Wan hte Nat sumpum sat. Sat ai ni nan mung Hpyen asuyaamasha Hpungkyi Masu ni N-htu hpai nna hkan kahtam sat hkawm ai gaw grai nan ladu lai mat sai re. Makam masham manghkang shapraw nna Myen Hpyen asuya ni bai matut up sha lu na matu Akawoit gayet wa ai lam rai nga ai. N-dai zawn Muslim Gala sat Poi kaba byin wa jang she- Mungkan Mungdan kaba ni mau mat masai. Am mat masai. ASSK mung Hpyen asuya hte pawng nna Myen mung masha ni hpe mung Masu, Mungkan ting hpe mung Masu rai taw nga ai hpe chye masai. MungkanaMungdan kaba re… nga ai ni, grai naw “Angawk ai …Hpyang ai”… ngu mu mada lu ai. “Shakrep hpe Taukawk” re..nga Myen ni Masu jaw ai hpe hpa majaw- Myi di,Na hpang kam taw ma ai da i? Katsu Baw Nu ngu she tsun mayu sai. Mungdan kaba ni re ngu -majoi Kam kaba, Yu kaba na lam n-nga ai.
Ya mung Simsa lam kaw ASSK hpe bai lawm shangun nna(shanhte hparan n-lu majaw n-rai) shanhte ra ai N-tara ai, Masu magaw, Hkalem hkalau hte UNFC ni hpe bai lu Maw Hkalawk sha na matu ASSKaN-gup hpe bai shap taw masai. Num labu hpe Cover la, Gyem nna Ahkaw ahkang la taw ai, Mai Bau Hpyi Myen Hpyen Gwi Chyit Gwi ran ni hpe hkyet nan rung dik ai yaw. Hpang jahtum ASSK hpe sha yawng hkra jawm n-ju na hpe shingran pyi mu taw nga n-ngai. (U Raw) kata kaw shang hkrup sai ASSK katut sha, katut naw na lam sha rai nga salu ai.
“ Anhte mung… Myen ni Shing Run gat jaw taw nga ai…(U Raw).. kata de n-shang hkrup na matu- Grai Sadi Maja ga” ngu…Tsawra Hkungga let….Numhtet dat mayu n-ngai re.
(Daw- 2- de bai matut hti ga)
at 7/29/2013 11:40:00 AM
Myen AsuyaaKatsi Majan Masing
Myanmar-China gas pipeline starts to operation
at 7/29/2013 07:36:00 AM
Sai chyup lu na Miwa nat kanu (vampire)aasak hpe dai ni jahkrung dat sai
by-(Xinhua News Agency)
A Myanmar-China natural gas pipeline (Myanmar section), co-invested by six parties from four countries including Myanmar, China, South Korea and India, was inaugurated in northern Myanmar's Mandalay on Sunday.
At about 4:12 pm (local time), Myanmar Vice President U Nyan Tun, Energy Ministers U Than Htay and U Zeya Aung, Chinese Ambassador to Myanmar Yang Houlan andaSouth Korean representative jointly started up the commissioning button.
When torches flamed in the sky of Namkham Measuring Station of Myanmar-China Gas Pipeline,astorm of applause and cheers broke out on the ceremony site and Namkham Metering Station.
The pipeline is part ofaso-called Myanmar-China Oil and Gas Pipeline project, which also includes buildingacrude oil pipeline. Starting from Kuaykphyu, it passes through Rakhine state, Magway and Mandalay regions and Shan state and enters Chinese territory at Ruili, Yunnan province through Namhkan.
The gas pipeline stretches for 793 km onshore within Myanmar's territory with six processing stations, while the crude oil pipeline, which is nearing completion, starts from Made Island and extends onshore for 771 km.
The gas pipeline hasadesigned annual throughput of 12 billion cubic meters before off-loading in Myanmar. The transmission capacity of the crude oil pipeline on the Myanmar side is designed at 22 million tons per year witha300,000-ton crude oil wharf being added.
After the completion and commissioning of the whole project,2million tons of crude oil and 20 percent of the designed throughput of gas will be off-loaded in Myanmar, which will be helpful to promote Myanmar's economic development and people's living standards.
Two joint ventures -- South-East Asia Crude Oil Pipeline Co., Ltd. (SEAOP) and South-East Asia Gas Pipeline Co., Ltd. (SEAGP) -- were registered and established with investment from all parties to respectively take charge of operation of the two pipelines.
The SEAOP involves China National Petroleum Corporation (CNPC), Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), while the SEAOP involves CNPC of China, DAEWOO of South Korea, OCEBV of India, MOGE of Myanmar, KOGAS of S. Korea and GAIL of India.
The two joint ventures have conducted operations in strict accordance with specifications and patterns of international pipeline projects since the beginning of pre-feasibility study stage, according to sources with the investors.
Responsible official of the SEAOP Jiang Changliang said at the commissioning ceremony that the areas where the pipeline passes through are featured with complicated terrain and environment, which posed serious challenges to the construction.
After three years of construction, the gas pipeline (Myanmar section) was completed and underwent test run on May 30.
The Myanmar-China Oil and Gas Pipeline project is said to have createdahuge amount of job opportunities for local people, hiring as many as over 6,000 for the construction work.
Meanwhile,atotal of more than 220 Myanmar enterprises were involved in the project with their employees being technically trained.
There has also been socio-economic development aid projects undertaken along the Myanmar-China gas pipeline project areas. So far, $20 million have been donated for use in education, medical treatment, health and disaster relief.
Besides, 45 schools and 24 clinics have been built to improve the teaching facilities for 19,000 students and medical facilities for 800,000 local people.
The joint ventures also offered 10 million dollars for repairing high voltage power grid line in Kyaukphyu, in which CNPC donation accounted for3million dollars.
In the second half of 2012, when Rakhine state experienced communal riot, the joint ventures extended 50,000 US dollars of aid in cash and 10 tons of rice. Moreover, they also donated 50, 000 dollars to quake-hit victims in central Myanmar.
Observers here said the China-Myanmar Oil and Gas Pipeline project isamulti-national and mutually beneficial energy project and also carries the goodwill of the peoples of China and Myanmar, adding it is bound to promote the regional economic development while deepening the China-Myanmar "Paukphaw" (fraternal) friendship.
ဘေးမဲ့တော ဥပဒေ ကို ကျားတွေကို ရေးဆွဲခိုင်းသလို ဖြစ်မနေဘူးလား။
at 7/27/2013 07:37:00 PM
BY-Duwa kachin blog
၁၉၄၇ အခြေခံ ဥပဒေဟာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များရှေ့မှာ မူကြမ်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး၊ ဖဆပလ ပါတီ အတွင်းမှာ ဗမာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များက စိတ်ကြိုက် ပြန်ပြင်ရေးဆွဲခဲ့လို့ တိုင်းရင်းသားများ ရဲ့ မူလရပိုင်ခွင့်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၊ ခွဲထွက်ရေး တောင်းဆိုမှုတွေ ဆူညံခဲ့ရပါတယ်။ ဖဆပလ အတွင်းမှာ မရိုးမသားလုပ်တာကို အရင်ကြိုသိနေတာက ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ကရင်တွေက တော်လှန်ရေး မစသေးဘူး၊ အင်းစိန် ခ၀ဲခြံမှာ ရှိတဲ့ ကေအိုင်ယူပါတီ ရုံး ကို ဖဆပလ ပါတီက အတင်းဖြိုလိုက်တယ်။ (နိုင်ငံရေး ပါတီအချင်းချင်း ရွေးကောက်ပွဲ မနိုင်မှာ စိုးလို့ လုပ်ကြံတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အင်းစိန်ဖက်မှာက ကရင်တွေများတော့ ဖဆပလ ပါတီ ရှုံးမှာ သေချာသလောက် ဖြစ်နေချိန်ပေါ့။) အဲဒီနောက်တော့ ကေအိုင်ယူဟာ သူပုန် ဖြစ်သွားတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေကပဲ အကြောင်းမဲ့ ခွဲထွက်ချင်သလိုလို အစိုးရ အဆက်ဆက်က သမိုင်းလိမ်ထားခဲ့တယ်။ (အမှန်ဆိုရင် အဲဒီ မူကြမ်းအတိုင်း မပြင်ပဲ ထားခဲ့သော် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး ဆိုတာလဲ မရှိတော့ပဲ အခုလောက်ဆို မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်နေမှာ အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။)
၁၉၇၃ အခြေခံ ဥပဒေ၊ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ တွေဟာလဲပဲ စစ်တပ် စိတ်ကြိုက် (တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဟန်ပြတွေနဲ့) ရေးဆွဲခဲ့ပြီး အတင်းအဓမ္မ အတည်ပြုခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ပြေလည်မှုမရပဲ အခုလို ဖြစ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်း အရင်းအမြစ်ဟာ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ကြောင့် ဖြစ်တယ်၊ လို့ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်တွေ အစဉ်တစိုက် ထောက်ပြနေပေမယ့်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ကတော့ မသိဟန်ဆောင်၊ ဗမာ နိုင်ငံရေး သမားအချို့လဲ သိမြင်သူနည်းလှပါသေးတယ်။ ဗမာလူထု နဲ့ အဆင်ပြေရင်ပြီးသွားမယ် လို့ ထင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လဲ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၃၊ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ တွေ အလီလီပြောင်းခဲ့လဲ မထူးဇာတ်ခင်းနေတာ အားလုံး အသိဖြစ်ပါတယ်။
အခုလဲ လာပြန်ပြီ၊ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ ကို သဘောကျလှပါရဲ့ ဆိုတဲ့ ဦးဌေးဦး တို့လို ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့တွေက အများပိုင်းပါပြီး၊ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ ကို အသက်နဲ့ ကာကွယ်မယ် ဆိုတဲ့ တပ်မတော်သားတွေက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျန်တဲ့ ပါတီတွေ အနည်းအကျင်းနဲ့ အခြေခံဥပဒေ ကို သုံးသပ်မယ်၊ တဲ့။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကဏ္ဍကိုတော့ မသိဟန်ဆောင်နေကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့နေရာမှာ စစ်မှန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူ ရှားပါးလှပါတယ်။ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ အမျိုးနွယ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေလောက်ပဲ ပါသေးတာပါ။
ဒီတော့... ဘေးမဲ့တော ဥပဒေ ကို ကျားတွေကို ရေးဆွဲခိုင်းသလို ဖြစ်မနေဘူးလား။
အရေးကြီးတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အပါအ၀င် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ၊ ဗမာလူထုခေါင်းဆောင်များ ကို ကိုယ်စား ပြုတဲ့ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အားလုံး ပါဝင် နိုင်တဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံ ကျင်းပ ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ညီလာခံမှ ထွက်လာတဲ့ သဘောတူညီမှုကို အခြေခံ ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တခု တည်ထောင်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မဖြစ်မချင်း တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများရဲ့ မူလ ရပိုင်ခွင့်ဟာလဲ ဆုံးရှုံးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆုံးရှုံးမှုကနေ တော်လှန်ရေး ဆိုတာလဲ ဆက်လက်ရှင်သန်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တော်လှန်ရေး ကြောင့် စစ်အသုံးစရိတ်တွေ ထပ်လိုအပ်လာမယ်။ လူမှုရေး ပဠိပက္ခတွေ ဆက်ရှိနေမယ်၊ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ အခန့်မသင့်ရင် နောက်ထပ် အာဏာရှင်တွေ ထပ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာလဲ နှလှံထူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မဟုတ်ရင်တော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စည်းမျည်းလုပ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကောက်စား... သားကောင်တွေ မညံ့ဖို့လိုနေပါပြီ။
Interviewed Guest - U Thein Sein/Presenter - Stephen Sackur
at 7/27/2013 10:14:00 AM
By-Ah Phu facebook
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား University of Cambridge, John F. Kennedy School of Government, Emmanuel College, Cambridge, Harvard University____
မြန်မာပြည်သား DSA။ Command & General staff college (ကလောမြို့ )၊၊
သမ္မတတစ်ယောက်နဲ့ သတင်းစာဆရာတစ်ယောက်တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကြောက်ဒူး
တုန်တုန် ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ အလွဲလွဲချော်ချော် ထပ်ခါတလဲလဲ အိနြေ္ဒမရဖြစ်ရ
သူလေးကတော့ ခင်ခင်ဝင်းယောင်္ကျား သဖြင့်လည်း ငပုတောသား ငသိန်းပဲ
ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ငသိန်းဘာတွေဖြေသွားတယ်ဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ
မရှိပါဘူး၊၊ ဒီတစ်ခါ သဘောကျတာက အင်တာဗျူးသမားပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊
အင်တာဗျူးဆိုတာ အဲလိုဖြစ်ရမယ်လို့ ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်၊၊ ဒဲ့တွေပါတယ်၊၊
(၁) အရင်ဆယ်စုနှစ်ခေတ်တုန်းက စစ်အာဏာရှင်ဘက်တော်သားစစ်စစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး
အခုပြောင်းလဲစေတဲ့ တွန်းအားက ဘာလဲ၊၊
(၂) DASSK အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို Sorry ပြောဖို့ရှိပါသလား၊၊
(၃) အစစ်အမှန်ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာကို ယုံကြည်နိုင်ဖို့ အရင်တုန်းကဖိနှိပ်ခဲ့တာ
တွေ မှားပါတယ်လို့ဝန်ခံစကားကို ကြားချင်ကြပါတယ်၊၊ နောင်တရမိပါသလား၊၊
(၄) နောင်တရသလား၊ မရဘူးလား၊၊
(၅) DASSK နဲ့ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုရှိသလဲ၊၊
(၆) စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီလား၊၊
(၇) အကယ်၍ DASSK ရွေးချယ်ခံရခဲ့ရင် ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်မှာလား၊၊
(၈) သမ္မတတစ်ဦးတည်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြုပြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပါ
တယ်၊ သို့သော် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒအနေနှင့်ကော ??
(၉) DASSK အနေနဲ့ ခေါင်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား
(၁၀) ၂၅% တပ်မတော်ကကော??
(၁၁) CIA မှတ်တမ်းအရ ဗမာပြည်ရဲ့ ထိပ်သီးစီးပွားရေးဟာ စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့
လက်ထဲမှာပဲ စုနေတယ်ဆိုတာကိုကော၊ ပြောင်းလဲသင့်သလာ??
(၁၂) အလကားစွပ်စွဲတာပေါ့ ဟုတ်လား၊ ဒါဆိုရင် သတ္တုတွင်း၊ သစ်လုပ်ငန်း၊
(၁၃) စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အရင် ၂၀ နှစ်လောက် တရုတ်နဲ့ပဲ ဆက်ဆံခဲ့ပြီး
အနောက်ဘက်ကို (USA) ဘက်ကိုဦးတည်တော့မလား??
(၁၄) မြစ်ဆုံရပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘေဂျင်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးကျဲသွားမလား
(၁၅) အာဏာရှင်စနစ်တုန်းက နိုင်ငံရေးသမား ထောင်ချီသတ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်
သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာ၊ တရားမျှတမှုကိုရှာပေးဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိပါသလား၊၊
(၁၆) တရားမျှတမှု JUSTICE ကိုမေးတာပါ၊၊
(၁၇) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ရာဂဏန်းများများ မင်းတို့အကျဉ်းထောင်မှာ
ကျန်နေသေးတယ်လို့ HR တွေကပြောပါတယ်၊၊ အဲဒါအတွက်ကော ??
(၁၈) နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် လို့သမ္မတကပြောနေပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်တွင်း
မှာပြည်သူတွေသတ်ခံရတာ၊ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာတွေကော ကြားနေရပါတယ်၊၊
(၁၉) ရိုဟင်ဂါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကော ?
(၂၀) စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့ ကျင့်ထုံးအတိုင်း ဒီမိုကရေစီကျကျတရား
စီရင်ပြုဖို့ (အထူးသဖြင့်)ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စစ်တပ်ကကော လက်ခံပါသလား၊၊
(၂၁) ဆိုဗီယက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ဂေါ်ဗာချေ လိုမျိုး ဘေးဖယ်ခံရနိုင်
(၂၂) ဒီမိုကရေစီကလေးအဆင့်ပဲရှိတယ်လို့ခင်ဗျားပြောပါတယ်၊ သို့သော် အရှေ့ 
တောင်အာရှနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများနီးတူ ဖြစ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမယ်
(၂၃) president u thein sein thank you very much
thank you, thank you very much, I invite to you to visit myanmar!
Are you prepared to go all the way to creat the truely democratic country?
ကျနော်တို့အစိုးရက သက်တမ်းအားဖြင့်လည်း တစ်နှစ်ခွဲသာရှိပါတယ်၊ အဲတော့ ဒီမို
ကရေစီရှေ့ကိုရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်လုပ်စရာတွေ ကျနော်တို့အများကြီး ကျန်ရှိ
၂၀၁၃-ဧပြီ = ၂ နှစ်တင်းတင်းနဲ့ ၃ လစွန်းခဲ့ပါပြီ၊၊ မေးခွန်းက တကယ်လုပ်ဖို့စိတ်
ပိုင်းဖြတ်ထားပြီလား လို့မေးတာဖြစ်ပေမယ့် ဖြေတာက (လုပ်မယ်/မလုပ်ဘူး)
ဆိုတာထက် လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်ရှီပါသေးတယ်လို့ပဲ ဖြေသွားပါတယ်၊၊
လုပ်စရာကတော့ ဘယ်တောအခါ မှကုန်သွားပြီလို့မရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်၊၊
မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ ဖြေတဲ့အဖြေက တခြားစီပါပဲ၊၊
ဒီလိုပါဗျာ.......... (မေး) ခင်ဗျားကြက်ဥကိုကြော်စားသလား၊ ချက်စားသလား၊၊
သြော်ကြက်ဥက တစ်လုံးခွဲပါရှိပါသေးတယ်၊၊ ရှေ့ ဆက်လည်းအများကြီးဥဖို့ကျန်ပါ
တယ်၊၊ ကြက်ဥစားရတာကို ကြိုက်ပါတယ်ကွယ်၊၊ အားရှိစေတယ်လေနော်၊၊ ahek!
— with JJ Marip and Tsaw Ra Tsaw.
Yawd Serk: Military ties with Burma premature before emergence of federal armed forces
at 7/27/2013 02:50:00 AM
Friday, 26 July 2013 13:22 S.H.A.N.
A federal armed forces that incorporates all the armed forces of the country intoasingle entity should be in place, before the West establishes closer military ties with Burma, said Sao Yawd Serk, Chairman of the Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA) yesterday.
“Or they will just serve to strengthen the hands of the Tatmadaw (Burmese military) against the resistance forces,” he toldameeting held yesterday on the Thai-Burmese border.
A participant agreed pointing out that, according to the 2008 constitution, the Burmese military’s self-appointed mission, contrary to other democracies, was to wage war not only against external dangers but also internal ones.
Prime Minister David Cameron meets Burmese President Thein Sein in the capital Naypyidaw, on 13 April 2012. (Credit: Stefan Rousseau/PA Wire)
This was the first time the leader of the Shan resistance movement that had concludedaceasefire with Naypyitaw on2December 2011 has spoken publicly in response to recent Britian’s approval to $5million arms export licenses to Burma.
The Burmese military has also been offered training courses in human rights, the laws of armed conflicts and the accountability of armed forces in democracies. “The training should not only be provided to the Burma Army, but also to the resistance armed forces,” he said. “It can wait untilafederal armed forces has been formed.”
Many of the ethnic groups have proposed that the Chief Minister ofaState/Region be elected and he/she, by virtue of it, automatically becomes the Commander-in-Chief of the armed forces of the state/region concerned.
According to the 2008 constitution, the Chief Minister is appointed by the President. Both of them have no say in military matters.
So far, the RCSS/SSA, like its sister organization in the north, Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA), has fought more than 100 clashes since the ceasefire. The last one took place in Kyaukme on 24 July.
Press Release - Lahpai Seng Raw, 2013 Roman Magsaysay Awardee
at 7/26/2013 11:17:00 AM
Yangon: First of all I wish to offer my heartfelt thanks to the Ramon Magsaysay Award Foundation and the Board of Trustees for acknowledging my work and including me in this year’s illustrious list of awardees.
I am deeply honored by this award, but also humbled in the knowledge that I owe it all to the host of wonderful friends, colleagues and partners at home and abroad, who have sustained me in my work with their wise counsel, help and encouragement. So I accept this award not asapersonal honour, but asacelebration of our collective achievement.
I first embarked on the ‘development’ journey, quite inadvertently in 1987, when the late Maran Brang Seng, Chairman of the Kachin Independent Organization (KIO), persuaded me to become involved in work to improve the situation of destitute Kachin communities along the borderlands of northern Myanmar. Today, I thank him and the KIO leadership for directing me on this path. I would also like to offer my sincere thanks to the government of Myanmar for opening the door for me to initiate openly and freely, programmes that would assist conflict-affected communities after the 1994 ceasefire agreements.
Sadly, as many of us know, that ceasefire in Kachin was not sustained. After 17 years fighting resumed in June 2011 on suchascale that to this day some 70,000 peoples are displaced. Without lasting peace there can be no real development. But the recent May 28-30 Myitkyina dialogue between the government and the KIO has given me new hope and I will continue to coordinate efforts, wherever possible, to resolve the underlying political grievances of the ethnic minority peoples of Myanmar and ensure that voices of the common people are heard in the ongoing peaceful transformation process.
In keeping with my commitment to work for sustainable peace andadevelopment process that will evenly spread across the country, I pledge to use the prize money towards projects that will protect and preserve the Myitsone area in northern Myanmar, and provide sustainable livelihood opportunities for its communities. Myitsone refers to the confluence area where2rivers converge to form the Irrawaddy River, the lifeblood of the nation.
Today the area is under threat fromadam project which poses grave dangers to its delicate eco-system, its cultural and religious heritage sites, and its communities, displaced and deprived of land and livelihood.
Losing Myitsone, for the Kachin, is like losing his or her heart and soul. It would bealoss of unbearable proportions, not just for the Kachin at the source of the Irrawaddy, but for the rest of the country also, for whom the river is like “amother who feeds Myanmar’s citizens”.
The dam project was suspended under Presidential Orders in 2011, but there are strong indications of an imminent resumption of construction. I am therefore, most grateful to the Ramon Magsaysay Award Foundation for providing me with the opportunity not only to use my prize money to protect and preserve Myitsone, but alsoapowerful forum to publicize the need to stop the dam construction once and for all. My fervent hope is that the Irrawaddy will continue to flow for all time, and that efforts to make thisareality with beafactor that unites all citizens of Myanmar.
Open Letter to ACWC regarding the Draft Declaration on the Elimination of VAW&C in ASEAN
at 7/26/2013 11:16:00 AM
ASEAN madang hta ASEAN People ni hku na ahkyak ai madang hku shang lawm ra nga ai hpe mung Anhte myu sha ni dum chye lu na matu shalai dat ya ai. ASEAN Government ni shing gyim ahkaw ahkang tawt lai nga ai hpe je yang na ASEN Charter kaw nan dai hpe ahkyak la na matu n ka da na, AICHR mung ahkyak la na dai ram force n nga tim anhteaMyen mung Asuya gaw REGIONAL madang hta ASEAN kaw sa shang lawm da sai re majaw anhte ni mung dai ASEAN government niashamu nga ai hpe hkan yu ra nga sai..
Sapa Tf Ahr 2013-07-24 Toacwc Draftdeclarationonevawc Final
at 7/25/2013 11:17:00 AM
အာရှတိုက်ရဲ့ နိုဘဲလ်ဆုလို့ တင်စားပြောဆိုကြတဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ရေမွန်မက်ဆေးဆေးဆုကို ကချင် ဒုက္ခသည်တွေ အရေး ဆောင်ရွက်နေသူ လဖိုင်ဆန်းရော့် ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
at 7/25/2013 11:07:00 AM
DVB TV News's photo.
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ပေးအပ်တဲ့ အာရှတိုက်ရဲ့ နိုဘဲလ်ဆုလို့ တင်စားပြောဆိုကြတဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ရေမွန်မက်ဆေးဆေးဆုကို ကချင် ဒုက္ခသည်တွေ အရေး ဆောင်ရွက်နေသူ လဖိုင်ဆန်းရော်၊ အာဖဂန်က အမျိုးသမီး မြို့တော်ဝန်၊ ဖိလစ်ပိုင်ကတဦး၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ နီပေါနိုင်ငံတွေက အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုတို့ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
ကချင်အမျိုးသမီး လဖိုင်ဆန်းရော်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ထိခိုက် ပျက်ယွင်းနေတဲ့ အသိုက်အ၀န်းကို တိတ်ဆိတ်တက်ကြွတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့သလို မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး အနာဂတ်အုတ်မြစ်အတွက် ဒေသခံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို အားကောင်းစေပြီးအကြမ်းမဖက်ပုံစံနဲ့ ပါဝင်လာအောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့အပေါ် အသိ အမှတ်ပြု ချီးမြှင်တာလို့ ရေမွန်မက်ဆေးဆေး ရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရေမွန်မက်ဆေးဆေးဆုရှင်လဖိုင်ဆန်းရော်ကို ဒီဗွီဘီက မေးမြန်းရာမှာ ဒီဆုရရှိတဲ့အတွက် ၀မ်းသာသလို သူနဲ့ (မေတ္တာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်း) အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မန်မာနိုင်ငံသား ၀န်ထမ်းတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခေါ်ယူနေ
at 7/24/2013 08:38:00 PM
ဂျပန်မြန်မာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အနေနဲ့ ဘွဲ့ရ မြန်မာနိုင်ငံသား ၀န်ထမ်းတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခေါ်ယူနေပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်လိူင် တင်ဆက် DVB
WHO KILLED KACHIN MOST ?
at 7/24/2013 10:00:00 AM
OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: WHO KILLED KACHIN MOST ?
at 7/24/2013 09:52:00 AM
OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: List of Presidents of Burma: LIST OF PRESIDENTS OF BURMA Titles of the head of state Although currently accorded the title of president , Burma's heads of ...
Myitrum Manang ni, Myen Ga Shagawp 1 bai shagun dat ai yaw. Machyoi Hpung Rapdaw ( MHR)amatu kyu hpyi dum nga ga oi. JIC
at 7/24/2013 09:47:00 AM
Myitrum Manang ni,
Myen Ga Shagawp 1 bai shagun dat ai yaw. Machyoi Hpung Rapdaw ( MHR)amatu kyu hpyi dum nga ga oi.
Kachin by Hugawng Kachin
မတရားအသင်းအက်ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဦးဘရန်ရှောင် ယနေ့ လွတ်ပြီ
at 7/23/2013 11:32:00 PM
Jade Land's photo.
23 July 2013 post by Kachin Wave
မတရားအသင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇(၁) ဖြင့် မြစ်ကြီးအားထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ၊ဂျန်မိုင်ကောင်းနှစ်ခြင်းစစ်ရှောင်စခန်းတွင် နေထိုင်သည့် ဦးလထော်ဘရန်ရှောင် ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာပြီး ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင်ဖြင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာအပေါ် ဦးဘရန်ရှောင်က “အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်” ဟုပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့်အပတ်တွင် မြစ်ကြီးနားတရားရုံးမှ ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်ကို ထောင်ဒဏ်(၂) နှစ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းက “မြစ်ကြီးနားကတော့ ဇာတ်လိုက် ဦးဘရန်ရှောင်ပါတာပေါ့။ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာတဲ့ အကျဉ်းသားထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အများပိုင်းဖြစ်တယ်”ဟုပြောသည်။
၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့် ကုလသမ္မကအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စမာရီယာတို့သည် ယခုအချိန်တွင် ကေအိုင်အို၏ Technical Advisory Team ရုံးဖွင့်ပွဲကို တတ်ရာက်ကာ မြစ်ကြီးနားသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်နှင့် အတူမြစ်ကြီးနားမှ လွတ်မြောက်လာသူ (၁၃)ယောက်ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်ရှိ အကျဉ်းထောင်များဖြစ်သော ဗန်းမော်၊မြစ်ကြီးနား၊ ပူတာအို စသည့် အကျဉ်းထောင်များမှ စုစုပေါင်း (၂၇)ဦးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၇၀)ကျော် ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ဖြင့်ယနေ့ လွတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။
တစ်နှစ်အတွင်း ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခြင်းနှင့် ရုံးချိန်းသွား များတွင် စုစုပေါင်းငွေသိန်း (၂၀)ကျော်ကုန်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရုံးချိန်းသွားရန်နှင့် ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ သည့် အချိန်တွင် ကုန်ကျသည့် စရိတ်များကို ကုန်စိမ်း ရောင်းကာ လှည့်ပတ်ပိုက်ဆံရှာဖွေရသည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်အားစီရင်ချက်ချပြီး တစ်ပတ်အတွင်း လွှတ်ပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မေလ(၃၁) ရက်နေ့ မြစ်ကြီနားတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင် ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။
ထိုပုဒ်မဖြင့် ဖမ်းဆီးကာ မတရားညှင်း
ပန်း နှိပ်စက်မှု များပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုသို့နှိပ်စက် မှုများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သို့တိုင်ကြား ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့်စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ လည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကုလသမ္မကမှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်(စ်) ကွီန်တားနား လာရောက်စဉ် တွင်လည်း ဇနီးဖြစ်သူက မိမိခင်ပွန်း၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများကို တင်ပြခဲ့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်အား ၂၀၁၁ခုနစ်၊ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအထူးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ (စရဖ) မှ ဗိုလ်ကြီး ကျော်စွာလင်း နှင့် စုစုပေါင်း(၉)ယောက်ခန့်သည် KIO/KIA များနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသည် နှင့် KIA ၏ ဒုဗိုလ်ကြီး ဖြစ်သည် ဟုစွပ်စွဲ ကာ ၎င်းနေထိုင်သည့် ဂျန်မိုင်ကောင် နှစ်ခြင်းစစ်ရှောင်စခန်း မှ ဖမ်းဆီးသွား ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင် မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် မတရားအသင်း အက်ဥပဒေနှင့် ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ စုစုပေါင်း (၇၀)ခန့် ရှိကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် စုစုပေါင်း (၅၀)ခန့်ရှိကြောင်း ထိုသူများအနက် မည်မျှ လွတ်မြောက်လာသည်ကိုမူ မသိရှိရသေးပါ။
KIO ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအကြံပေးအဖွဲ့ Technical Advisory Team ရုံး ကို မြစ်ကြီးနားတွင် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်
at 7/23/2013 11:27:00 PM
KIO Dat kasa
Maigan kyithkai Du Gawlu La Awng,
Du Kaba Hpung Gan Hkun Nawng,
Du Kaba Sin Wa,
Sara Dau Hka,
Mung shawa dat kasa,
Sara Ma Lu Nan,
Sara Brang Mai,
Sara Minzai Dau Lum,
Sara La ring
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ၏ ငြိမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ Technical Advisory Team ရုံးကို ဇူလိုင်လ ၂၃ ယနေ့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူ KIO ဆက်ဆံရေးရုံးတွင် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုး ဆောင်အဖွဲ့ (PCG)မှ ဦးအင်ရှန်ဆန့်အောင် (Salang N-sang San Awng) ပြောသည်။
“ဒီမနက် ၇ နာရီမှာဆုတောင်းပွဲလုပ်တယ်၊ ၉ နာရီခွဲမှာ ဖဲကြိုးညှပ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်ဖွင့်တယ်၊ ၁၀ နာရီကနေ ၁၁ နာရီထိတော့ မဂျွယ်ခန်းမဆောင်မှာ အခမ်းအနားလုပ်တယ်၊ အဲဒီမှာ ဆရာကဘား ဆွမ်လွတ်ဂမ်၊ ဦးအောင်မင်းနဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်တို့က မိန့်ခွန်းပြောတယ်၊ ဒီည ညစာစားပွဲရှိသေးတယ်” ဟု KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။
Technical Advisory Team ရုံးတွင် တာဝန်ခံအနေဖြင့် KIO လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး ဂေါ့လူလအောင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဖုန်ဂန်ခွန်နောင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဆင်ဝါး၊ ဆရာဒေါင်ခါးနှင့် ပြည်သူလူထုဘက်မှ ၁၀ ယောက်တို့သည် ယနေ့မှစ၍ ရုံးထိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ပြည်သူလူထုဘက်က ဆရာမလုနန်၊ ဆရာဘရန်မိုင်၊ မင်းဇိုင်းဒေါင်လွမ်း၊ ဆရာလရိပ် တို့ပါတယ်။ အခုတော့ အကုန်လုံးတော့ မ၀င်သေးဘူး။ ၈ လပိုင်းကုန်ဘက်မှာတော့ အားလုံးဝင်မယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာ သူတို့ Technical Advisory Team နဲ့ပတ်သက်ပြီး လိုင်ဇာမှာ အစည်းအဝေးရှိသေးတယ်” ဟု PCG (Pace-talk Creation Group) မှ ဦးအင်ရှန်ဆန့်အောင်က ပြောသည်။
ယနေ့ဖွင့်ပွဲတွင် အစိုးရဘက်မှ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် တို့တက်ရောက်ပြီး ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဘက်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင် ဆရာကြီး ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး လမာဂွမ်ဖန်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ရော်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး မရန်ဇော်တောင် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် UN မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး တက်ရောက်ကာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကချင်အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုများ စုစုပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
more photo=Click on link KNG
Post 23 July 2013 by KNG News
K I O ဌာနချုပ်ရှိ ကူမင်းအမျိုးသားကောလိပ်၏ ပထမဆုံးနှစ်သင်တန်း ဩဂုတ်တွင် ဖွင့်ပြီ
at 7/23/2013 11:08:00 PM
* 23.july.2013 by MIZZIMA
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းအမျိုးသားကောလိပ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမဆုံးအတန်းကို ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်တွင် ကျောင်းသားစတင်လက်ခံကာ စတင်သင်ကြား
ပေးတော့မည်ဟု KIO ဗဟိုပညာရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
လိုင်ဇာရှိ ကူမင်းအမျိုးသားကောလိပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်၏ ဌာနခွဲတစ်ခုအဖြစ် ၂၀ဝ၇၊ ၂၀ဝ၈ ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာမှ ယခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်တွင် ကောလိပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဟု KIO ပညာရေးဌာန အတွင်းရေးမှူး ဆရာရော်ဆော်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခင်က လိုင်ဇာရှိ ကူမင်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဌာနခွဲတွင် နှစ်နှစ် ပညာသင်ယူပြီးမှသာ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်တွင် ပထမနှစ်ကစ ပြန်လည်သင်ယူရသည်။ ယခုမူ လိုင်ဇာတွင် နှစ်နှစ်ပညာသင်ယူ
ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းအမျိုးသား တက္ကသိုလ်တွင် တတိယနှစ်သင်တန်းနှင့် နောက်ဆုံးနှစ် သင်တန်းတို့သို့ တိုက်ရိုက် တက်ရောက်နိုင်သည်ဟု ဆရာရော်ဆော်က ပြောသည်။
“ကောလိပ်အဆင့် တိုးပေးထားတာ။ ဒီမှာ နှစ်နှစ်တက်ပြီး ဟိုမှာ တက္ကသိုလ်ပြန်တက်ဖို့ လုပ်ထားတာ။ ခုတော့ ဒီမှာ
နှစ်နှစ်တက်ပြီး ဟိုမှာ တက္ကသိုလ်တက်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကူမင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းခွဲလို့ နာမည်ပေးထားတာ။ ဒီနှစ်က ကောလိပ်လို့ သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်” ဟု ဆရာရော်ဆော်က ပြောသည်။
လာမည့် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ထိ ပထမနှစ်ပြီးဆုံးပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်လကျောင်း
ပိတ်မည်ဖြစ်ကာ မတ်လ ၁ ရက်တွင် ဒုတိယနှစ် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။
သင်ကြားမည့် ဆရာ၊ ဆရာမများမှာ ကူမင်းတက္ကသိုလ်မှ ပညာသင်ကြားခွင့်ပြုချက် ရရှိသူများဖြစ်သည်။ ပထမနှစ်တွင် တရုတ်ဘာသာနှင့် စကားကို ကျွမ်းကျင်မှု လေးခုဖြစ်သော ရေး၊ ဖတ်၊ ပြော၊ နားထောင်တို့ကို သင်ကြားမည်။ ဒုတိယနှစ်တွင် တရုတ် ဘာသာစကားနှင့် စာကျွမ်းကျင်ရန် ဆက်လက်သင်ကြားသွားမည် ဖြစ်သည်။
သင်ကြားမည့် သင်ရိုးများမှာ လတ်တလော ကူမင်းလူမျိုးစုတက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားပေးနေသော သင်ရိုးများဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲကိုလည်း ထိုကျောင်းမှ စစ်ဆေးမေးမြန်းသည်။ ကျောင်းဆင်းလက်မှတ်ကိုမူ ကူမင်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်က
အစိုးရကျောင်းများနှင့် KIO ကျောင်းများမှ အနှိမ့်ဆုံး ၁၀ တန်းအောင်မြင်သူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဘွဲ့ရပြီးသူများကိုလည်း လက်ခံသလို၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလည်း လက်ခံပြီး စာမေးပွဲ သွားရောက်ဖြေဆို
တက္ကသိုလ်ဝင်ကြေးတစ်နှစ်လျှင် တရုတ်ယွမ် ၅၀ဝ၀ (မြန်မာကျပ်ငွေ ရှစ်သိန်းနီးပါး) ဖြစ်သည်။ ဘော်ဒါနေလိုသူ
ကျောင်းသားများအတွက် တစ်လလျှင် တရုတ်ငွေ ၃၅၀ (ကျပ်ငွေ ခြောက်သောင်းခန့်) ဖြစ်သည်။ တခြားအသေးသုံး
များကို ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကျောင်းဝင်လျှောက်လွှာ
ပုံစံဖြည့်ပြီး KIO ပညာရေးဌာနသို့ ပေးပို့နိုင်သည်။
၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ၃၈ ဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်မှ ယမန်နှစ်ထိ
ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ၁၃၆ ဦး တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင်မူ ၃၀ ဦး ကူမင်းတက္ကသိုလ်
“သူတို့ထဲက ထက်မြက်တဲ့ လူတွေပါတယ်။ ၃ ယောက်က ဂုဏ်ထူးတန်းပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကတောင် အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ လူတောင် ရှိနေပြီ။ တချို့က ၂ နှစ်လောက်တက်ပြီးသွားတယ်။ သွားတာ မတူဘူး။ အားလုံးက မသွားနိုင်ကြဘူး၊ သူတို့ တခြား ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်သွားလုပ်လို့ရတယ်” ဟုဆိုသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်က အစိုးရနှင့် KIO အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် ပူးတွဲပညာသင်ကြားခွင့်ပေးသည့် အစီအစဉ်အရ KIO နယ်မြေရှိ ၁၀ တန်း ကျောင်းသူ/သားများကို နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ဘော်ဒါဆောင်အဖြစ် သီးသန့်နေထိုင်ပြီး အထက (၁) ကျောင်းတွင် တက်ရောက်၍ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် အစိုးရဘက်မှ စာမေးပွဲလာရောက်ဖြေဆိုရန် ပြောဆိုခြင်း မရှိသဖြင့် KIO ဘက်မှလည်း လုံခြုံရေးစိုးရိမ်၍ ထိုအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။
at 7/23/2013 11:01:00 PM
ကျနော်တို့က စစ်အစိုးရကနေ ပေါက်ပွါးလာတာ ဖြစ်တယ်... စနစ်သစ်ရောက်လို့ တံခါးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်တို့ ဘာမှ မတတ်ဘူး ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်... (ဖေါင်းဖေါင်းဖေါင်းဖေါင်း... လက်ခုပ်သံများ... )
အခုမှ အဖြစ်မှန်သိတယ် ဆိုတော့ ဘယ်တတ်နိုင်တော့မလဲ.. မြန်မာပြည်သူတွေလဲ မွဲလှပါပြီ.... အခုထိ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံနေတဲ့ ငနဲသား MyanmarExpress, Ko John, Oppositeye, လူထု မောင်ကာဠု တို့ကိုလဲ အမြင်မှန်ရလာအောင် သွန်တင်ပေးပါ။
(ဗီဒီယို ဖိုင်ကို Lachid Kachin မှ ကူးယူပါသည်။)
SENG MARAN A SHAGUN LAIKA ( DEAR KIO/KIA)
at 7/22/2013 07:10:00 AM
TSAW RA AI KIO
http://kachinmail.blogspot.com/2013/07/dear-kiokia.html BY-SENGGING@GMAIL.COM(SENG MARAN)
Ruyak tsimyam hkrum sha nga ai w.p myu sha ni ( click on video link)
at 7/21/2013 10:40:00 AM
Ahkyak ai hta grau Ahkyak dik ai Ten Daw- ( VI )
at 7/21/2013 03:05:00 AM
Ahkyak Ai Hta Grau Ahkyak Dik Ai Ten6 by Hugawng Kachin
at 7/21/2013 03:01:00 AM
"တစ်နိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ဆိုတာ တစ်တပ်ထဲရှိတယ်
at 7/21/2013 02:57:00 AM
စောက်ရေးမပါတဲ့ "တစ်နိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ဆိုတာ တစ်တပ်ထဲရှိတယ်" ဆိုတဲ့ rhetoric ကို သုံးလို့မ၀နိုင်သေးဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမဒိန်းစစ်တပ် တစ်တပ်ထဲ ရှိလိုက်ပါလား၊ တိုင်းရင်းသားတွေ အကုန်မျိုးပြုတ်ကုန်လိမ့်မယ်။ စစ်တပ်တစ်တပ်ထဲရှိချင်ရအောင် အဲဒီစစ်တပ်က ဘယ်လောက် စောက်စည်းကမ်းရှိနေလို့လဲ? အားတိုင်းယားတိုင်း အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကိုပဲ ဓမြတိုက်၊ လုယက်၊ မဒိန်းကျင့်ချင်နေတဲ့စစ်တပ်။ ကချင်သမိုင်းဟာ KIA ကို အပြုတ်တိုက်လိုက်လို့ ပြီးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီခေတ်မှာ စစ်တပ်တစ်တပ် တည်ထောင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်လွယ်တယ်ဆို အားလုံးအသိပဲ။ ကချင်တွေကို လက်နက်စွန့်၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး တုိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးမှာ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က အချက်တွေမလွဲမသွေ လုပ်ရလိမ့်မယ်။
၁) မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဟာ Federal ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ သမိုင်းအရကော၊ ယဉ်ကျေးမှူအရကော Federal ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးသော စနစ်ပဲ။
၂) ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှိရှိသမျှ မတရားတပ်ဆွဲထားတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အားလုံး ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ် ပြန်ကျရမယ်။
၃) မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာစာဟာ official language ဖြစ်သလို ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်စာဟာ official ဖြစ်ရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာစာနဲ့၊ မြန်မာစကားကို အားလုံးသင်ကြားရမှာဖြစ်သလို၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ လူတွေအားလုံးလည်း ကချင်စာနဲ့ ကချင်စကားကို သင်ရမှာဖြစ်တယ်။ တစ်ခြားတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ရှမ်းပြည်မှာနေတဲ့ ကချင်တွေလည်း ရှမ်းစာနဲ့၊ ရှမ်းစကားကို သင်ရမယ်။
၄) ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ မှန်သမျှမှာ ကချင်အစိုးရက full political power ရှိရမယ်။
၅) Constitution အသစ် ရေးကိုရေးရမယ်။ 2008 Constitution နဲ့ ကမ္ဘာ ပတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက democracy နိုင်ငံဖြစ်နေပါပြီလို့ လိုက်အော်နေတာကိုက Rapper ကြက်ဖရဲ့ သီချင်းလိုပဲ, ရှက်တတ်ရင်လဲသေဖို့ကောင်းနေပြီ။
၆) National Assembly မှာ တုိုင်းရင်းသားအားလုံး တန်းတူပါဝင်ခွင့်နဲ့၊ ညီတူညီမျှအခွင့်အရေးရှိရမယ်။
ရ) National Education မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ content တွေ ပါရမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သမိုင်းတွေကို ထိန်ချန်ထားပြီး ဗမာ့သမိုင်းကိုပဲ ဦးစားပေတဲ့ curriculum တွေမဖြစ်ရဘူး။
၈) Discrimination & Rascism ကို constitutionally banned လုပ်ရမယ်။ မတူကွဲပြားလူမျိုးတွေ များပြားလှတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Discrimination & Racism က နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုမှာ များစွာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
၉) Freedom of speech & Freedom of Religion ရှိကိုရှိရမယ်။
ဒီအချက်တွေက Democracy ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ အချက်တွေပဲ။ ဒါတွေကို ဆက်လက် ရှောင်ဖယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့၊ Democracy ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်တော့မှ စန်းပွင့်မှာမဟုတ်သလို၊ သူအစား psedu-democracy or totalitarianism state တော့ဖြစ်လာမှာ ဧကန်အမှန်ပဲ။ စကားလုံးအမှားပါရင် ခွင့်လွတ်။ မြန်မာစာ ဒီလောက်ရေးတတ်တာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ဖို့ မမေ့နဲ့အုံး။ ကချင်စာတစ်လုံးမှမတတ်ရင်တောင် chyeju kaba sai (ကျေးဇူးကဘာဆိုင်) ကိုတော့တတ်ကျမှာပါ။
at 7/21/2013 02:36:00 AM
Zaw Wonn Maung
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ပထ၀ီဝင် အနေအထား မျိုးစုံရှိတဲ့ တိုင်းပြည် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မှီတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်မည်ဟု ကြွေးကြော်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကြီးတို့ရဲ့ လေသံကို ယနေ့ခေတ် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာကိုလည်း အတွေးနယ်ချဲ့မိပါတော့တယ်။
ဆီကိုရေချိုး ….ဆေးရိုးမီးလှုံ….စပါးတောင်လိုပုံ…ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ရှေးအခါက တိုင်ပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သော ဘုရင်တို့ဟာ တိုင်းခန်းလှည့် လည်ရင်တောင် ရွှေတို့ဖြင့်စီမံထားတဲ့ သလွန်ညောင်စောင်းပေါ်မှာ လဲလျှောင်းရင်း ရာပေါင်းများစွာသော အပျိုတော်တို့ ဝန်းရံလျှက် လှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းသူပြည်သားများမှာလည်း ကျွန်း ပျဉ်းကတိုး တို့ဖြင့်သာ အိမ်ဆောက်လုပ်ကြပါတယ်။ . သံ သွတ် ခဲပုတ် ငွေ ကြေး ကျောက်စိမ်း ပယင်း ကျောက်သံပတ္တမြား တို့များစွာထွက်ရှိပြီး သယံဇာတပေါများလှပါသော ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီး ဟုတင်စားရလောက်အောင် တောင်တန်းကြီးများနှင့် ပင်လယ်ပြင်ကြီးတို့က ပတ်လည်ဝိုင်းရံ ပြီး မုတ်သုန်သစ်တောကြီးများ ကျောက်သံပတ္တမြား တို့များစွာထွက်ရှိတဲ့ တောင်တန်းကြီးများနှင့် ရေနံထွက်မြေ များ သီးပင်စားပင်စိုက်ပျိုးရန် မြေသြဇာ အလွန်ကောင်းသော မြေပြန့်လွင်ပြင်များ မြောက်မှတောင်သို့ ပင်လယ် ပြင်အထိ စီးဆင်းသည့် မြစ်ကြီးများနှင့် မည်သည့်နေရာမဆို စိုက်ပျိုးမြေ ဖြစ်ထွန်းပြီး ရွှေအလွန်ပေါသော ရွှေနိုင်ငံကြီးမှာ ရှည်လျားလှတဲ့ ကမ်းရိုးတန်း ရှိတယ်။ အဆင့်မီ လှပတဲ့ ပင်လယ်ရေချိုးဆိပ် အပန်းဖြေ စခန်းတွေ ရှိတယ်။
ကျွန်းငယ်ပေါင်း ရာချီ ပါဝင်တဲ့ ကျွန်းစု အခြေအနေ မျိုးလဲ ရှိတယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ၂ ခုတောင် ရှိတယ်။ အမြဲစိမ်းတော ၊ ရွက်ပြတ်တော ၊ မုတ်သုန်တော ၊ ဒီရေတော .. စတဲ့ သစ်တော မျိုးစုံ လွင်ပြင်ကျယ်တွေ တောင်တန်းတွေ မီးတောင် ၊ ရွှံ့မီးတောင်တွေ နှင်းဖုံးတဲ့ ရေခဲတောင်တွေ ကုန်းတွင်းရေအိုင်ကြီးတွေ ရှိတယ်။ မြစ်ကြီး စာရင်းဝင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်မြစ်ကြီး နှင့် မြစ်ချောင်း မြောက်များစွာ ရှိတယ်။ အရှေ့မှ အနောက် ၊ အနောက်မှ အရှေ့ ၊ မြောက်မှတောင် .. အပြင် .. တောင်မှ မြောက် ကို စီးတဲ့မြစ် အထိ ရှိတယ်။ အငူတွေ ၊ အမော်တွေ လဲရှိတယ်။ လုံးဝ သမုဒ္ဒရာထဲ ထီးတည်း ကျွန်းလဲ ရှိတယ်။ ကန္တာရ တပိုင်း အခြေအနေမျိုးလဲ ရှိတယ်။ကုန်းမြင့်လွင်ပြင်ကြီး တွေလဲ ရှိတယ်။နွေရယ် မိုးရယ် ဆောင်းရယ် ဆိုပြီးတော့ ဥတုရာသီ ၃ မျိုးတောင် ရှိတယ်။ သိပ်အေးတဲ့ နေရာတွေ ရှိတယ် ၊ သိပ်ပူတဲ့ နေရာတွေ ရှိတယ် ၊ သိပ်စိုစွတ်တဲ့ နေရာတွေ ရှိတယ် ၊ သမမျှတတဲ့ နေရာတွေလဲ ရှိတယ် ၊ စုံလို့ပါပဲ။. . . မသေးငယ် လှပေမယ့် ... ကြီးမားတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး လည်းမဟုတ် ပေမဲ့ ဒီလောက် စုံလင်ပြည့်စုံတာ ပြည့်စုံတဲ့ တိုင်းပြည် ရှားပါးတာ သတိပြုမိမှာပါ။ သဘာဝသဝယံဇာတ မထွက်ရင်တောင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့တင် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ တော်တော်ဖြောင့်မှာ။သို့သော် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အဲဒီလိုအချက်အလက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံလွန်းလို့ တိုးတက်မှုကို ရပ်တန့်စေခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတို့ဟာ တိုးတက်မှုကိုမရှာကြ တဖြေးဖြေး အပျင်းထူလာကြပြီး အပင်ပန်းမခံလို အချောင်လိုက် အချောင်လိုခြင်ကြတော့ တာပါပဲ။ နိုင်ငံတော်သည် သယံဇာတပေါသည် စိုက်ပျိုးမြေ ဖြစ်ထွန်းသည် ဆန်ရေစပါးပေါသည် အချိန်တန်လျှင် ထမင်းတလုပ်ဝနှိုင်သည် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နှိုင်ကြသည် လောဘမရှိ ထိုကဲ့သို့သော အသိများကြောင့် လူပင်ပန်းဘို့မလို အကြံဥာဏ်ထုတ်ဘို့မလို ကြိုးစားဘို့မလို မြန်မာပြည်တွင် ငတ်သေသူမရှိ ထိုသို့သော အတွေးအခေါ်များကြောင့် တပင်တပန်း အလုပ်မလုပ်ကြဘဲ လှုပ်ခါရွေ့ခါ မျှဖြင့်မပူမပင် ကောင်းကောင်းစား ကောင်းကောင်းဝတ် ကောင်းကောင်းဖြုံး ကောင်းကောင်းပျော် ရသမျှနှင့်သာ ပျော်မွေ့နေကြပြီး တဖြေးဖြေးပျင်းလာကြ၏။ ပျင်းသောကြောင့် ဖျင်းလာကြ၏။ ဖျင်းသောကြောင့် ကြာသော် ငတ်ကုန်၏။ ထို့ပြင် စိတ်အား ညံ့ဖျင်းလာကြ၏။ ဘယ်သူမဆို မိမိဘို့ချည်း စဉ်းစားလာကြ၏။ ဘယ်ကိစ္စမဆို မိမိဘက်ကချည်း တွေးတောလာကြ၏။ ဤမျှနိမ့်ကျသော စိတ်နေယိုယွင်းမှုတိုသည် ဝမ်းရောဂါကူးစက်သကဲ့သို့ နေရာအနှံ့ကူးစက်လာကြပေသည်။ ထိုသို့သောအကြောင်းအရင်းတို့မှာ တိုင်းပြည်၏ ဆုတ်ယုတ်လာရခြင်း အကြောင်းအရင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတို့မှာ “စီးပွားရေးကို ကောင်းမွန်စွာ မစီမံ မလုပ်ကိုင်တတ်ကြသဖြင့် မြန်မာပြည်သည် ကြီးပွားသော နိုင်ငံဖြစ်မလာခဲ့၊ သို့သော် မြန်မာပြည်၏ သဘာဝ သယံဇာတ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုက အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက် ထာဝစဉ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ယင်းအနာဂတ် မှာလည်း ပြည်သူတို့ လက်ထဲတွင် ရှိခဲ့ပါတယ်”ဒါပေမဲ့ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝလှတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ စိတ်အား ယိုယွင်းပျက်စီးမှုတွေကြောင့် ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းသူ စစ်အာဏာရှင် များကြောင့် ဖွတ်ဖွတ် ညက်ညက် ကြေခဲ့ရပါတယ်။ အဏာရူး နေဝင်းက အစပြုလို့ လက်နက်အားကိုး စစ်တပ်ကိုအသုံးချပြီး အဏာသိမ်းခဲ့ရာမှ ယနေ့ အထိတိုင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ နလံမထူနှိုင်တဲ့ ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ ….
အစိုးရ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုလွဲမှားချင်း အဂတိလိုက်စားမှု အကျင့်ပျက်ယိုယွင်းမှု စိတ်ဓါတ်အားညံ့ဖျင်းမှု တွေကြောင့် ပြည်သူလူထုမှာတော့ မည်သို့ပင် ပြဲလန်နေအောင် အလုပ်လုပ်စေကာမူ ထိုက်တန်သော အဘိုးအခမရကြ ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အဆမတန်ပေးဝယ်ကြရ သူတို့၏ဘဝများမှာ မည်သို့ပင်ကြိုးစား ရုန်းကန်ပါသော်လည်း ဒုံရင်း…ဒုံရင်း…ပါဘဲ။ အာဏာရှိသူတို့နှင့် ပူးပေါင်းကြီးပွားလာကြသော နီးစပ်သူ များသာ ကြီးပွားလာကြပါတော့တယ်။ အရည်အသွေးမရှိတဲ့၊ အခွင့်အာဏာမက်မောတဲ့၊ ကိုယ်ကျိုးရှာတတ်တဲ့သူတွေဟာ သစ္စာမရှိသော အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတို့ထံ ၀န်းရံလာပြီး ဒီလူတွေဟာခွဲခြားစည်းရုံးတဲ့နည်းတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ သဘောမတူသူတွေကို ဖြိုခွင်းတယ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အကြား နားလည်မှုဟာ အခွင့်အရေးနဲ့ အာဏာဖြစ်လာစေပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကိုသက်ဆိုးရှည်စေခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းသူတို့မှာ တို့မှာ ကုန်ပစ္စည်း အပေါ်တွင်လည်း ဈေးတင်သည် ပစ္စည်းရှားပါးလာလျှင်လည်း ဝယ်ယူပြီး လှောင်ထားလိုက်ကြပြီး အဆမတန်ဈေးနှင့်ရောင်းကြသည် မည်သို့မျှပင် အထိန်းအကွပ်မရှိကြ ပေ။ လူဦးရေသန်း ၆၀ တွင် သောင်းဂဏန်းမျှလောက်သာရှိသော ခရိုနီများ ၏ ချလှယ်မှုကို ပြည်သူလူထုမှာ ရင်စီး၍ ခံနေကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ခရိုနီ ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတရပ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ခရိုနီတွေဆိုတာ အာဏာရှိသူတွေနဲ့ ပေါင်းစားပြီး ကောင်းစားခဲ့သူတွေ၊ သူတို့ဟာ လူချမ်းသာတွေပေါ့ဗျာ။ ဘဏ်တွေ၊ ကုန်ထုတ်အရင်းအနှီးဖြစ်တဲ့ ငွေကြေး၊ မြေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ အားလုံးကို ခရိုနီတွေကပဲ ပိုင်ဆိုင်ပြီး မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ခရိုနီတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်မှု ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ နီးစပ်ရာအာဏာပိုင်တို့နှင့် ပေါင်းစားရိုက်စားသော အကျင့် တပြည်လုံးသို့ပျံ့နှံ့လာခဲ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တို့ဟာ နိုင်ငံပိုင် ပစ္စည်းဟူသမျှ သူတို့၏သားသမီးများသာမက အပေါင်းအဖေါ်များပါ ထင်သလိုစားသုံးကြစေပါတယ်။သူတို့ ၏သားသမီးများမှာ ဒါဒို့ပြေ၊ဒါဒို့မြေ၊ဒါငါတို့မြေ ဟု နိင်ငံတခုလုံးကို အပိုင်စားစေဟူသော စိတ်ဓါတ် ကို ငယ်စဉ်ကပင်သွင်းထားခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တိုးတက်ဖို့ထက် ကိုယ့်အိပ်ဖောင်းဖို့၊ ပြည်သူတွေသက်သာချောင်ချိဖို့ထက် ကိုယ့်အတွက် အမြတ်များများ ခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့ အားသန် သူတွေ လက်ထဲ ရောက်မဲ့ စီးပွားရေးအနာဂါတ်ကို မြင်ယောင်ပြီး ရင်လေးမိပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကပင် သွပ်သွင်းခဲ့သော ပညာရေးစနစ်နှင့် ခေတ်စနစ်ရဲ့ စေစားချက်ကြောင့် စစ်ဗိုလ်တွေ စိတ်ရူးပေါက်တိုင်းပေးလိုက်ကြတဲ့ ကို့ယို့ကားယား နိုင်ငံတော်လမ်းညွှန်တွေကြောင့် ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖရိုဖရဲနဲ့ နောက်ဆုံး ခြစား လောက်ကိုက်ဖြစ်ပြီး အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အကြောက်တရားကသာ အရာရာကိုလွှမ်းခြုံသွားပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစားသုံးသပ်နှိုင်စွမ်းလည်း တပါတည်း ပျောက်ဆုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေ အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အာဏာရှင်တွေဟာ မိမိတို့အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် ပြည်သူလူထုရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး နှိတ်ကွပ်ရာမှာ အဆိုးဆုံးအချက်ကတော့ အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာကို နှိတ်ကွပ်ဖျက်ဆီးခြင်းပါဘဲ ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ဘဲအာဏာရှင်တွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ သူတို့အလိုတော်ကျ ကပြအသုံးတော်ခံပေးမဲ့ လူတန်းစားတရပ်ကို မွေးမြူနှိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒီလူတန်းစားတွေကဘဲ အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြန်လည် နှိတ်ကွပ်မဲ့ ယန္တရား တစ်ခု ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာရပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ အာဏာရှင်စနစ်ဟာ အမြစ်တွယ်ညိပြီး အာဏာရှင်စက်ဝန်းထဲမှာ သံသယာလည်နေရပြန်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် အာဏာရူးတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ အစစအရာရာ နောက်ကျခဲ့ရပါပြီ။နှစ်ပေါင်းများစွာလည်း နောက်ကျလို့နေပါပြီ။
ထိပ်ပိုင်းမှစပြီး အကျင့်ပျက် ယိုယွင်းမှုကြီးမှာ ခြစားသကဲ့သို့ အောက်ခြေအထိပါ လှိုက်စားလို့ဖြင့်နေပါပြီ။တိုင်သူပြည်သားတို့မှာလည်း တပင်တပန်း အလုပ်မလုပ်ကြဘဲ လှုပ်ခါရွေ့ခါ မျှဖြင့်မပူမပင် ကောင်းကောင်းစား ကောင်းကောင်းဝတ် ကောင်းကောင်းဖြုံး ကောင်းကောင်းပျော် ရသမျှနှင့်သာ ပျော်မွေ့ကြပြီး နိုင်ငံ၏ ရှေ့အနာဂတ် အတွက် ဖြစ်ပ်ါလာမည့် အကျိုးဆက် ခံစားရသည့် ရင်မှလှုပ်ခတ်မှု တို့ကို ပြောပြတတ် သူ မရှိအောင်ရှားပါးလာပါတော့တယ်။ ၎င်းမှာ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် တကိုယ်ကောင်းစိတ်မွေး မြူရေး၏ ပင်ရင်းအစပင် ဖြစ်ပါတော့တယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ဆင်းရဲတွင်းထဲပို့ခဲ့ပါတယ်။တဆင့်ပြီးတဆင့် အရည်းအချင်းမရှိပဲ ရာထူးလိုချင်တဲ့ အရှက်ကင်းမဲ့တဲ့ အချောင်သမား၊ တွေပြန်အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ နှစ်ငါးဆယ်ကျော်မှပဲ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံထဲ မှာထိပ်ဆုံးစာရင်းရောက်ခဲ့ရတော့တာပါပဲ...။နိုင်ငံတော်သာ ဆင်းရဲခဲ့ပေမဲ့ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား တစ်စု နှင့် နီးစပ်သူ အသိုင်းအဝိုင်း မှာတော့ ….ပြောမပြနှိုင်လောက်အောင်ပင် ကြောက်ခမန်းလိလိ ချမ်းသာနေကြတာ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပင် သူတို့က ဟားတိုက်ရီနေကြမှာ ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားနှင့် စစ်ခရိုနီကြီးများ၏ အကျိုးစီးပွားဖြစ်သော (နိုင်ငံအတွက်မပါ) လုပ်ငန်းအများစုမှာ တရုတ်နိုင်ငံကြီး၏ ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ စနစ်သစ်ဖြစ်သော နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူစီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး မဟာဗျူဟာအတွင်းသို့ သပ်လျှိုဝင်ရောက်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ သဘာဝသစ်တောများမှ သစ်များကို တရုတ်တို့နဲ့ ၄င်းတို့ရဲ့ လက်ပါးစေ နယ်မြေခံများက တရားမ၀င် ခုတ်လှဲပြီး တရုတ်ပြည်ဘက်ကို ခိုးထုတ်နေကြတာ အခုဆိုရင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမက ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီလို ခိုးထုတ်နိုင်အောင် မြန်မာစစ်တပ်က တိုင်းမှူးအပါအ၀င် ထောက်လှမ်းရေး တပ်မှူး၊ ဗျူဟာမှူး၊ စစ်ကြောင်းမှူး၊ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ခွဲမှူးများသာမက ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနများ၊ ရဲ၊ ဌာနဆိုင်ရာ၊ သစ်တောဌာန စတဲ့ တာဝန်ရှိသူအားလုံးဟာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သစ်ပင် သစ်တောတွေ နည်းပါးသွားတဲ့ အတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ မုတ်သုံရာသီဥတု မုတ်သုံမိုး အ၀င်နောက်ကျတာ၊ အထွက်စောတာ၊ မုတ်သုံကာလ တိုတောင်းသွားတာ၊ အပူချိန် မြင့်တက်လာတာ၊ သမရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ မိုးလေ၀သ အခြေအနေတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်တာ စတာတွေ တွေ့ကြုံ လာရပါတယ်။
နှစ်ရှည် စီမံကိန်းကြီးများဆိုင်ရာ အန္တရာယ်မျိုးစုံတို့၏ ဆိုးကျိုးအမွေကို နောင်မျိုးဆက်သစ် ခေတ်အဆက်ဆက်ထိ တိုင်အောင် ခံစားသွားကြရတော့မည့် အမျိုးသားရေး အန္တရာယ်ကို တမျိုးသားလုံး စုပေါင်းကာကွယ်သွားရန် အချိန်ဆိုက်ရောက်လာပေပြီ။
အရှည် ၇၉၃ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသည့် မြန်မာ-တရုတ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသည် ကျောက်ဖြူမှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များကို ဖြတ်သန်းပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့တစ်နှစ်လျှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗမီတာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလျံ ပို့ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တစ်နှစ်လျှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗမီတာ ၁၂ ဘီလျံ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်၂၀၁၃ခုနှစ် ကစပြီး ပို့ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်သက်တမ်းမှာတော့ နှစ်ငါးဆယ် ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ကြေး (Copper) သဘာဝသိုက် (Mine) ကို တရုတ်ကို ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ် လက်ပံတောင်းတောင် စာချုပ်ဟောင်းအရ ဦးပိုင်နှင့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိပြီး အစိုးရမှ လေးရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိခဲ့ရပြီး လက်ပန်းတောင်းတောင်ဒေသခံ ပြည်သူများ၏တောင်းဆိုချက်အရ၊တောင်သူလယ်မားတို့၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ပြန်ပြင်သည့် စာချုပ်မှာ အစိုးရမှ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြန်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်မျိုးဆက်သစ် ခေတ်အဆက်ဆက်ထိ တိုင်အောင် ခံစားသွားကြရတော့မည့် အမျိုးသားရေး အန္တရာယ်ကို လက်ပန်းတောင်း တောင် တောင်သူလယ်သမားများက မဆုတ်မရွံ့သော စိတ်ဓါတ်ဖြင့် စုပေါင်းကာကွယ်သွားကြတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ပန်းတောင်း တောင်သူလယ်သမားတို၏ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး အပေါ်သစ္စာစောင့်သိမှုမှာ ကမ္ဘာကပင် သိခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာတမျိုးသားလုံး နိုးကြားကြဘို့ အချိန်တန်ပါပြီ….
မြန်မာ့ဆန် ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ခန့် တရုတ်သို့ တင်ပို့နေပြီး ၅ မှတ်၊ ၁၀ မှတ်၊ ၁၅ မှတ်၊ ၂၅ မှတ်၊ ပေါင်းဆန်နှင့် ကောက်ညှင်းဆန်တို့ကိုပါ တင်ပို့နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာပြည်မှစီးပွားရေး၊ စစ်ရေး အရရှားပါး လှစွာသော အခွင့်အရေးကြီးများကို စစ်သူကြီးများ၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ရရှိလျက်ရှိနေပါတယ်။
မန္တလေးတွင် တရုတ်လူမျိုး များစုနေထိုင်လာကြသည့်အတွက် မန္တလေး၏ အချက်အခြာကျသော နေရာအားလုံးလိုလို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးလိုလိုသည် တရုတ် အမျိုးသားတို့လက်တွင်း သို့ကျရောက်ခဲ့ကြရပြီးမန္တလေးသားတို့မှာ မြို့စွန်၊ မြို့ဖျား ရေမရ၊ မီးမလာသော ဆင်ခြေဖုံးရပ် ကွက်များသို့ လွင့်ပါးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။ တရုတ်အမျိုးသားတို့များ လာ၍ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းလာသည်မှာ မဆန်းပါ။ ဆန်းသည်က အဆိုပါ တရုတ်အမျိုးသားတို့သည် မန္တလေးကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဘယ်လိုပုံစံဖြင့်ဝင်ရောက် လာကြသနည်းဆိုသည်က ဆန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်အရပ်တွင် လူဦးရေသန်း ၁၃၀၀ ကျော်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံ။ အနောက်ဘက်တွင်ကား လူဦးရေ သန်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိသည့် အိန်္ဒိယနိုင်ငံနှင့် လူဦးရေသန်း (၂၀၀) နီးပါးရှိသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံ လူဦးရေ တိုးတက်မှုနှုန်းများသည့်နိုင်ငံမျာ အကြားတွင်ရှိနေတဲ့အတွက် လူမျိုခံရမည့် အန္တရယ်မှာလည်း အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများအတွက် အနောက်ဘက်တံခါးရော အရှေ့မြောက်တံခါးပါ လုံခြုံရန်အရေးကြီးနေပါပြီ်။
ဘူးသီးတောင် မောင်တောဒေသတွင် ဘင်္ဂါလီက လူဦးရေ၏ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားက ၄ ရာခိုင်နှုန်း။ မန်္တလေးမြို့ကြီးတွင် တရားဝင်စာရင်းအရ တရုတ်အမျိုးသား အိမ်ထောင်စု ငါးသောင်းကျော်ရှိ နေပါပြီ။စစ်အုပ်ချုပ်ရေး၏ စည်းစနစ်မဲ့မူ၊ လွဲမှားသောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတို့၏ အကျိုးဆက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ဦး အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံး၍ အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်သည်ပင်လျှင် မည်မျှခက်ခဲကြောင်း ကြုံဖူးကြမည် ထင်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာများဖြင့် လ.၀.က ရုံးသို့ အခေါက်ခေါက်အခါခါသွားပြီးမှ ကိစ္စပြီး မြောက်ပါတယ်။ နဝတ လက်ထက်က ကိုယ့်ကိုထောက်ခံဖို့ တစ်ခုထဲအတွက် ယခင်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နစကလို့ ခေါ်တဲ့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အသွင်ပြောင်း တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့လူများရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုကြောင့် အနောက်ဘက်မှ ၀င်လာကြသော ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းသောသူများ၊ မန္တလေးမြို့ပေါ်သို့ အရှေ့မြောက်မှ ၀င်ရောက်လာသူများမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ မှတ်ပုံတင်ရကြ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ကြရသည်မှာ မြန်မာပြည်ဖွား သစ္စာမဲ့သူများ၏ အကျင့်ပျက်ယိုယွင်းမှုကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ရှေ့ကာလ လူမျိုးဆက်များမှာ ကုလားပေါက်ဖေါ်လေးများသာ ဖြစ်လာပေတော့မည်။ နောက်ဆက်တွဲ ရခဲ့တဲ့ ရလဒ်ကတော့ လတ်တလော ကြုံတွေ့နေကြသော ပဋိပက္ခများ၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းများ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပြသနာများ စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေး အရ တဖြည်းဖြည်းချင်းလည်မျိုအထိ ၀ါးမျိုလာမည့် ပြဿနာများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတစ်ခုလုံးသည် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိရေးဟု ကြွေးကြော်ရုံသက်သက်ဖြင့်တော့ တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးထူးလာလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။စိတ်ခံစားမှုအပေါ် အာရုံညွတ်ခြင်းထက် လက်တွေ့ကျကျ အမြင်ကျယ်ကျယ်တွေးခေါ်နိုင်ရန် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှပုဂ်္ဂိုလ်များ အထူးသဘောပေါက်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအရ တိတိကျကျ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရ မှာပါ ဒါဟာ နိုင်ငံတော်အရေး အမျိုးသားရေး ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ တရားဥပဒေကို အခြေပြုပြီး တိကျပြတ်သားစွာ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ဖို့သာ လိုပါတယ်။ လမ်းပြသူ၊ ခေါ်ဆောင်လာသူ၊ နောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်သူ၊ လမ်းကြောင်းရှင်းသူ၊ လာဘ်ငွေယူပြီး သွားစေသူ၊ လမ်းကြောင်းတလျှောက် ဂိတ်အဆင့်ဆင့် ဖြတ်ကျော်ရာတွင် တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ စသည်ဖြင့် ရှိကြရာ အားလုံးကို ဖေါ်ထုတ်အရေးယူနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။လ၀က ရုံး ၀န်ထမ်းတွေ ကလည်း နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာ သစ္စာရှိဖို့ ဒီအချိန်မှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်၊ဒီလိုအချိန်မှာ နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တွေကို မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးမပြုဘဲ တိုင်းပြည်မျက်နှာကို ကြည့်ရမယ်အချိန်ကိုေ၇ာက်နေပါပြီ။
နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးကိုသာမက နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးရဲ့ အသက် သွေးကြောဖြစ်သည့် မြန်မာ့ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကိုပါ အပိုင်စီးသိမ်းပိုက်နိုင်ရန် အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံကြီးက ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ စနစ်သစ်ဖြစ်သော နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူစီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး မဟာဗျူဟာဖြင့် သပ်လျှိုကာ ကြိုးပမ်းလာနေပြန်ပါပြီ။ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးနှင့် ဆည်ဝန်းကျင်တွင် ရေကာတာများစွာ ဝိုင်းရံ တည်ဆောက်နေသည်မှာ အမိရင်ခွင်၌ နှစ်ရာထောင်ချီ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီးဆင်းလျက် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကို အသက်ဆက် ပေးနေရှာသော ကမ္ဘာ့မြစ်များ စာရင်းဝင် မြစ်မင်းဧရာဝတီကြီး ပျောက်ပါက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှသည် ပင်လယ်ဝအရောက် မြစ်ရိုးတလျှောက် ချောင်းကော မြစ်ကောတွေ ဖြစ်လာစေတဲ့ အပြင် မြစ်ရေလျှံတာတွေ၊ ကမ်းပါးပြိုတာတွေလည်း ဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်။ပိုဆိုးတာက ရွှေတူးဖော်ရာမှာ သုံးတဲ့ ပြဒါး၊ ခဲနဲ့ ဆိုင်ရာနိုက် တွေကြောင့် ရေသတ္တ၀ါတွေ အပါအ၀င် လူတွေကို ဒုက္ခရောက် စေနိုင်ပါတယ်။ ပြဒါးသင့် ငါးတွေကို လူတွေက စားသောက်မိရင် ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆုတ်ယုတ်စေတာတွေ၊ ဉာဏ်ရည် နိမ့်တာတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝ ၀န်းကျင် ထိခိုက်မှုရဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ အနာဂတ်အတွက် ဖြေဆေးမဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းသူပြည်သားတို့မှာလည်း ဆင်းရဲတွင်းနက်လာကြရသောကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအပေါ် သစ္စာမရှိကြတော့ မိမိတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ဆင်းရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အောက်တွင် လိုက်လျှောညီထွေစွာ နေတတ်သူတို့ အဖို့ အကျိုးလည်းရှိ၏ စီးပွားလည်းတက်၏ အစိုးရမင်းများ၏ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းပင် ခံကြရပါတယ်။ တစ်စနှင့်တစ်စ ကိုယ်ကျိုးရှာလာကြခါ အုပ်ချုပ်သူတို့မှာလည်း လူမိုက်များမွေး၍ ပြည်သူလူထုတို့၏ အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုတိုမှာ စီးပွားအဆင်မပြေဖြစ်လာကြည့်အခါ ထိုလူဆိုးလူမိုက်တို့ထံ ဆက်ကြေး ပေးကြရပါတယ် ယင်းလူဆိုးလူမိုက်များနှင့် အုပ်ချုပ်သူတို့မှာ ဝေမျှခံစားကြပါတယ်။ သြဇာအဏာရှိသူများက အကြမ်းဘက်လုပ်ရပ်များအတွက် အပြစ်မရှိသူများ ဟု အထင်ရောက်စေရန် စိတ်ကြီးဝင်နေသူများအဖြစ် သွတ်သွင်းခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် ကျူးလွန်သူများကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် သူရဲကောင်းဆုများပေးခြင်း ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း တို့ဖြင့် မက်လုံးများပေးကာ မရှိဆင်းရဲသားများ လောဘ ရမ္မက်သားကောင်များ လူရမ်းကားများအတွက် အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ယခင်တုံးက ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူမိုက်လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး လူရာဝင်စာရင်း မရှိကြတဲ့ သူတွေက ကြံ့ဖွံ့ဖြစ်လာပြီး အရေးပါအရာရောက် လာသလိုတွေဖြစ်နေတော့ ပိုပြီးအံ့သြရပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားကြီးများ ဘဝကိုကြည့်ပြန်တော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ စစ်တပ်က အထက်လူကြီးတွေပေါင်းပြီး တောင်သူလယ်သမားကြီးများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် နှောက်ယှက်ကြပါတော့တယ်။ လယ်မြေတွေသိမ်း ခံရတယ် ။ ကျေးရွာ ပြည်သူလူထု တွေဟာ စစ်တပ်ရဲ့ လူမဆန်စွာ ပြုကျင့်ခံရပုံတွေ ပေါ်တာဆွဲတာ၊ အဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေတာတွေဟာ မထူးဆန်းတော့သလို လယ်ယာမြေများကိုလည်း တပ်ပိုင်အဖြစ် မတရား သိမ်းယူတာမျိုး အပြင် တိုင်းရင်းသူလေးများအား စော်ကားဖျက်ဆီးကြတဲ့အထိ အတင့်ရဲ ကြတာမျိုးတွေဟာလည်း ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်လို့ ပြောရမလို ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တစ်ခုလိုသာ ဖြစ်နေပါတယ်။ လူမွဲဆိုသူတို့မှာ ကုန်းရရုန်းရ လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် မောပန်းလွန်းလှပြီး သေလည်းမသေဝံ့ ခွဲဝေမျှတမှုမရှိသော လူချမ်းသာတို့ဆီမှလည်း မလုယက်ဝံ့ ရင်တွင်းမြိုသိပ်လျှက် အစရှာမရဘဲ တနုံ့နုံ့ နှင့် ကြိတ်မှိတ်ခံစား နေကြရပါတယ်။
နစ်နာသူတို့မှာ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသော ပြည်သူတို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်မှာ ထိုအုပ်ချုပ်သူတို့ကသာဖန်တီးပြီး ပြည်သူလူထုထံမှ ငွေညှစ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှအုပ်ချုပ်သူများမှာလည်း ထိုကဲ့သိုပေါင်းပြီး မျှဝေကြခြင်းဖြင့် မိမိတို့ လက်ထက်တွင် ရပ်ရွာ အေးချမ်းသည်ဟု နာမည်ရခါ ရာထူးဂုဏ်ထူးများတက်နေ ကြရပြန်ပါတယ်။ ထိုနည်းများဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားလာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ အရင်းအမြစ်မှာ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားများ ကိုယ်တိုင် အချောင်ဖြတ်လမ်းမှလိုက်၍ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလိုမှု ပျင်းမှု ကြွားဝါလိုမှု မရိုးသားမှု တို့ကြောင့် မျိုးချစ်စိတ်ကင်းမဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် ဆင်းရဲတွင်းထဲ နစ်ခဲ့ရတာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကချို့ယွင်းချက်မှာ အကျင့် ယိုယွင်းမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြတဲ့ အာဏာရှင်တွေဟာ လက်နက်အားကိုးနှင့် သတ်ဖြတ်ပြီးမှ အကြောက်တရားဖြင့် အာဏာရှင်စနစ်ကို သက်ဆိုးရှည်စေခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အာဏာရှင်တွေကတော့ သူတို့ထက်ပိုပြီး ယုတ်မာပါတယ် လက်နက်အားကိုးနှင့် သတ်ဖြတ်ပြီးမှ အကြောက်တရား ဖြစ်စေတဲ့အပြင် လူတို့၏ လူနေမှုဘဝကိုပါ ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီး လိုက်ခြင်းပါဘဲ။ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ပြီး နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်တွေချ၊ နှိပ်ကွပ် တာတွေကြောင့် အကျဉ်း ကျနေသူတွေဟာ မိသားစုတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲသူတွေ၊ သားသမီး မိသားစုတွေနဲ့ ကွဲသူတွေ၊ သေကွဲကွဲသူတွေ၊ ရှင်ကွဲကွဲသူတွေ၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျမ်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေး စတဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ နည်းအမျိုးမျိုး ထိခိုက် ပျက်စီးမှု တွေကို ခါးစည်းခံခဲ့ကြရပါတယ်။နိုင်ငံရေးနှင့်ပါတ်သက်ပြီး နှိပ်ကွပ်ခံခဲ့ရသူတွေ ကတော့ လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက် အများစုက အပြင်လောကမှာ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ဘဝရပ်တည်ဖို့ အခက် အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေရကြတာလည်း မနည်းပါဘူး။အပြင်လောကက လုပ်ငန်းတွေ၊ အတတ်ပညာတွေနဲ့ အံဝင်မှု မရှိတော့ ဝမ်းရေးအတွက်၊ အတည်တကျ မရှိတဲ့ ကြုံရာ ကျပန်း အလုပ်တွေကိုပဲ ရှာဖွေ လုပ်ကိုင် နေကြရတာပါ။ လူငယ်တွေရဲ့ ဘဝ အညွန့်တလူလူ တက်စ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ကာလမှာ တရားခံ အစစ်မဟုတ်ဘဲ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ အကျဉ်းချ ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် သူတို့ဘဝတွေဟာ စိတ်ပိုင်းကော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ပျက်စီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကြည်အိုင်လိုမျိုး နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ စစ်ကြောရေး စခန်းတွေက ငရဲခန်း နှိပ်စက်ခန်း တွေမှာ သောက်တဲ့ ရေထဲ မာကျူရီ ထည့်ပြီး ဦးနှောက် ပျက်အောင် လုပ် လူမသိ သူမသိ လက်လွန် သွားတဲ့ သူတွေ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာ ရေတွက်လို့ မရပါဘူး။ မြန်မာ တပြည်လုံးကို အကြောက် တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ မျိုးကို ရိုက်သွင်း ခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့်ပါ။စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ သတင်းပေးတွေ စိုးမိုးချိန်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရင်တောင် ကိုယ့်နိုင်ငံ အကြောင်း အကောင်း အဆိုး နည်းနည်းတောင် မဟ၀ံ့ ၊ ကချင် ပုဆိုးတောင် မ၀တ်ရဲ၊ အိမ်မှာ အန်တီစု ပုံတောင် မထားရဲတဲ့ သာမန် ကျောင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀တွေ ရှိခဲ့ရတယ်။ ထောက်လှမ်းရေး ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်၊ ကလိမ်ကကျစ် ဉာဏ်ကတော့ တော်တော် ကြောက်ဖို့ ကောင်းရိုး အမှန်ပဲ။ ခွင့်လွှတ်နိုင်သူတွေ ခွင့်လွှတ်လို့ ရပေမဲ့ သမိုင်းကိုတော့ မေ့လိုမရဘူး။ ပြင်လို့ မပါဘူး။
လူသည် လူသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် ကြီးကျယ်သည်မြင့်မြတ်သည်မရှိပါ လူကို လူလို့ဘဲမြင်စေခြင်ပါတယ် လူတို့သည် မိမိဖြစ်တည်ရာအရပ် ဖြစ်တည်ရာအမျိုးတို့တွင် အချောင်ခိုမနေကြပဲ ကြီးပွားတိုးတက်အောင် အားသွန်ကြိုးစားကြဘို့သာလိုပါတယ်။ သို့မှသာမိမိတို့ဘာသာ ကြီးကျယ်တိုးပွားနှိုင်ပါမယ်။ အချောင်ရယူလိုစိတ် သူတပါးအပေါ် အနိုင်ကျင့်လိုစိတ် မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် သူတပါးအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်လိုစိတ် အတွေးအခေါ်မျိုးတွေပါ ဖျောက်ဖျက်ပစ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံ မိမိတို့လူမျိုး တိုးတက်ကြီးပွားရေးအတွက်သာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့လို့ ကြွေးကျော်နှိုင်မည့် ခေတ်ရောက်အောင် တကယ့်မျိုးချစ်စိတ်များ ပေါ်လာအောင် ပညာပေးဘို့လိုပါတယ်။
တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ အဆင့်ရှိသော တိုင်းရင်း ညီလာခ...
ဘေးမဲ့တော ဥပဒေ ကို ကျားတွေကို ရေးဆွဲခိုင်းသလို ဖြစ...
Interviewed Guest - U Thein Sein/Presenter - Steph...
Yawd Serk: Military ties with Burma premature befo...
Press Release - Lahpai Seng Raw, 2013 Roman Magsay...
Open Letter to ACWC regarding the Draft Declaratio...
အာရှတိုက်ရဲ့ နိုဘဲလ်ဆုလို့ တင်စားပြောဆိုကြတဲ့ ၂၀၁၃...
မန်မာနိုင်ငံသား ၀န်ထမ်းတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခေ...
Myitrum Manang ni, Myen Ga Shagawp 1 bai shagun da...
မတရားအသင်းအက်ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဦးဘရန်ရေ...
KIO ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအကြံပေးအဖွဲ့ Technical Advisor...
K I O ဌာနချုပ်ရှိ ကူမင်းအမျိုးသားကောလိပ်၏ ပထမဆုံးန...
Ruyak tsimyam hkrum sha nga ai w.p myu sha ni ( cl...
Pandung Shadaw Du Hkra Gasat Sa Wa Ai Ladat
PANGLUNG (96-96 )
Seeking your cooperation for release ofahuman ri...
Kachin update: Political detainee sentenced to two...
UK approves US$5 million in arms export deals to B...
ကေအိုင်အိုတပ်စခန်းနေရာသို့ ဗမာ့တပ် ၀င်ရောက်လာရာမှ...
Bawk Ja, the Candidate of Kamaing Kachin State wa...
နားမလည်နိုင်ဘူး ဒီမိုကရေစီ//ဒီမိုကရေစီ ရယ်
Despite Myitsone dam suspension displaced villager...
Ahkyak Ai Hta Grau Ahkyak Dik Ai Ten Daw- (5)
Ye Htut hte hkrum shaga ai Kachin protesters nia...
Kachin protesters nia,Video file
Myen ma 30aga hpe sha wa Japan ni kam naani?
Kachin Protest against Thein Sein in front Sofitel...
Kachin protest arrival of Thein Sein in London Hea...
Laknak Kaja Lu lang na ladat shaw ra sai
WHY REFORM IN BURMA IS ONLY SKIN DEEP ( click on v...
အနတ္တတရား နဲ့ မျိုးစောင့် ဥပဒေ အကြောင်း
အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်သို့ ဆင...
မြစ်ကြီးနားမြို့ နဲ့ ငါးမိုင်ဝေးသော (မန်ခရိန်းရွာ)...
KARAI HPE SHAKAWN AI MAHKAWN BUK NNAN PRU SAI..(. ...
မျိုးစောင့် ဥပဒေ ကန့်ကွက်တဲ့ အကြောင်းရင်း ရှင်းတမ်...
The Military's Still In Charge - By Bertil Lintner...
ကချင်ပြည်သူလူထုနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တွေ...
KIO turns military headquarter intoaboarding sch...
google glass ( pratdep IT myiset )
Ngang Grin Hkra Gawde Da Sai Amyu Sha Shanglawt Ra...
Panglung matut ( 92-93 )
ဘိန်းကုန်သည် - လော်စစ်ဟန် စနေနေ့က (၆.၇.၂၀၁၃) ရက်နေ...
Hkying hkum 24 ( 24 hours ) mung lai sai
2012 -2013 TSANG ( 10 ) HPE NINGTAWN HPAN (6) (6...
ဥပဒေ ရေးဆွဲရင် ၀ါးလုံးရမ်း မဖြစ်ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ...
Kachin Suffering ( Book )
Seng Maranashagun laika (2) SIGNATURE- SEN HKUM ...
panglung (91 )
မြန်မာက မောင်း၊ ထိုင်း က ဖေါင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူတွေ ...
BRITISH AMBASSADOR NNAN Mr ANDREW PATRICK HTE FORE...
KNO Thailandatang madun laika hpe aja awa madi s...
A HKYAK AI HTA GRAU AHKYAK DIK AI TEN ( DAW IV )
Karai Kasang lawm ai mung masa rai ra ai
တစ်ကျော့ပြန် ကချင်စစ်ပွဲ (၂)နှစ်ပြည့် ၊ကချင်လူငယ်...
Miwa Gumsan mungdan hta ya aten myen mung masha ni...
AHKYAK AI HTA GRAU AHKYAK DIK AI TEN ( DAW III )
American children speak for the Kachin of Burma (M...
KACHIN AND AMERICAN ARE FRIENDS
AHKYAK AI HTA GRAU AHKYAK DIK AI TEN ( DAW II )